जर्मनीमा ईसाई विज्ञान |
जर्मनीमा ईसाई विज्ञान
जीवनबाट पोर्ट्रेट अरपड डे पास्थोरीले
मूल लान्गियर संग्रह
जर्मनीमा क्रिश्चियन साइन्सको शिक्षा फैलाउने उनको प्रयासको यस पुस्तकमा फ्रान्सिस थर्बर सीलको आफ्नै खाता धेरै वर्षदेखि यसको पाठकहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत भएको छ।
लांगइयर हिस्टोरिकल सोसाइटीले जर्मनीमा क्रिश्चियन साइन्सको प्रिन्टि को धारणा विशेष गरी उचित छ किनकि यो श्रीमती सीलको जर्मनीमा मिसनको लागि जिम्मेवार रहेको मेरी बीचर ल ्गियर थियो। श्रीमती लान्गियर परिचयमा उल्लेख गरिएको "महिला" हुन्।
यस पुस्तकको प्रकाशनका लागि सबै अधिकारहरू मेरी एफ। बार्बरले लांगययर फाउन्डेशनमा तोकेका छन्। मिस बार्बर लगभग दुई दशकहरुदेखि यस प्रेरणादायक पुस्तकको प्रकाशन र वितरणमा सक्रिय थिए।
लामो ऐतिहासिक ऐतिहासिक समाज
मेरी बेकर ईडी म्यूजियम
1896 मा एक अमेरिकी परिवारले विश्वभर यात्रा शुरू गरे। उनीहरूलाई पठाइएको विदाई उपहारहरू मध्ये एउटा थियो मेरी र बेकर एड्डी द्वारा लेखिएको विज्ञान र स्वास्थ्यको साथ बाइबलको साँचो। लामो यात्रा पछि पत्नी र बच्चाहरू हिउँदको लागि जर्मनीको ड्रेस्डेनमा रोकिए र त्यस शहरको संगीत र कलाको आनन्द लिन सके। यी शान्त महिनाहरूमा लेडीले विज्ञान र स्वास्थ्यको लागि लगनशीलताका साथ अध्ययन गरे। उनी गहिरो चासो राख्थिन्, र उनीहरुसंग कुराकानी गर्छिन् जसलाई उनी सामाजिक रुपमा यो अद्भुत पुस्तक र त्यसमा समावेश भएको सत्यको बारेमा भेटे।
1897 को सुरुको वसन्तमा तिनीहरू अमेरिका फर्के र न्यू योर्कको बन्दरगाहमा आए। भोलिपल्ट बिहान उनीहरू क्रिष्टको दोस्रो चर्च, साइन्टिस्ट, न्यु योर्कमा सेवारत भए र सेवाको अन्त्यमा उक्त महिलाले पहिलो पाठक, श्रीमती लौरा लाथ्रोपलाई खोजिन्, जो एक शिक्षिका पनि थिइनन् र उनको कुरा अत्यन्त उत्साहका साथ बताइन्। उनको पुस्तक प्राप्त गर्न र यसलाई पढ्नको अनुभव, र उनले यसका बारेमा ड्रेस्डेनका मानिसहरूलाई बताउछिन् र उनीहरूलाई आश्वासन दिएकी थिइन कि अमेरिका पुग्ने बित्तिकै उनीले एक जना कार्यकर्तालाई क्रिश्चियन विज्ञान परिचय गराउन र त्यहाँ स्थापना गर्न अनुरोध गर्छिन्।
हाम्रो आफ्नै शहर न्यु योर्कमा क्रिश्चियन साइंसको कामको लागि अझ धेरै कामहरू गर्नु बाँकी थियो जुन त्यतिबेला संसारको दोस्रो ठूलो सहर हो र यसमा कामदारलाई विदेश पठाउने अनुरोधलाई थोरै चिन्ता दिइयो; तर सच्चाइ जर्मन जनतामा पुग्न खोज्ने इच्छा यस महिलाको मुटुको निकट थियो, र केही महिना पछि उनी फर्किए र उनको अनुरोधलाई नविकरण गर्‍यो। यस पटक उनको बिन्ती हाम्रो शिक्षक, श्रीमती लाथ्रोपको हृदयसम्म पुग्यो, जसले यी मानिसहरूलाई सत्य बोक्न कसैलाई पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। भोलिपल्ट श्रीमती ल्याथ्रोपले मलाई बोलाएर मलाई यो कथा बताइन् र भनिन् कि उनलाई लाग्यो कि यो परमेश्वरबाट आएको आह्वान हो, र म जवाफ दिन यो व्यक्ति हुँ र यो काम गर्न अगाडि बढें।
मेरो बुवाका पुर्खाहरू फ्रान्सेली ह्यूगेनोटहरू थिए जसले आफ्नो समयको लोकतन्त्रबाट बच्न र आफ्नो अन्तस्करणको आज्ञाबमोजिम परमेश्वरको उपासना गर्ने स्वतन्त्रता पाउन इ ्गल्याण्ड गएका थिए। तिनीहरू भगवानको दाखबारीमा कडा कामदारहरू थिए, र जब धेरै पुस्ताहरू पछि, तिनीहरूले नयाँ धार्मिक भूमि स्वतन्त्रता प्रस्ताव गरेको नयाँ भूमिको बारेमा थाहा पाए, ती तीर्थयात्रीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले अमेरिकाको खतरनाक यात्रामा यात्रा गरे।
नयाँ इ ्ल्याण्डमा तिनीहरूले आफ्नो जीवन र प्रतिभाहरू परमेश्वर र मानिसजातिको सेवामा समर्पित गरे। तिनीहरूका मानिसहरू प्रचारक, शिक्षक र चिकित्सक थिए।
मेरी आमाको परिवार स्क्याच क्वेकरहरू थिए। तिनीहरूले पनि आफ्नो जीवन परमेश्वरको सेवामा समर्पित गरे। टेक्सास र मेक्सिकोमा मेरो बुबा १ वर्षको उमेरमा मिसनरी बन्नुभयो। यी देशहरूमा उनी घोडामा सवार भएर प्रचार गर्थे र जहाँ गए पनि प्रचार गर्ने इलाकाका विभिन्न ठाउँहरूमा यात्रा गरे। उनी आफूले काम गर्ने मानिसहरूका घरमा बसोबास गर्थे, यसैले शास्त्री, येशू ख्रीष्टको निर्देशनलाई शाब्दिक रूपमा पालन गर्थे: “अनि जुन घरभित्र पस्छौ, पहिले भन, यस घरमा शान्ति रहोस्। ... र उही घर मा रहन, खाने र तिनीहरू दिंदा जस्तो कि पिउने। घर-घरमा नजाओ ” (लूका 10:5-7). आफ्नो पार्थिव जीवनको बाँकी वर्षहरूमा उसले सुसमाचारको प्रचार गरिरह्यो।
मेरो बाल्यकालदेखि नै मैले मेरी आमालाई असाध्यै बिरामी भनिरहेको पीडित देखें। उनीसँग पर्याप्त क्षमता भएकी थिइनन् उनको परिवारको पदभार लिनका लागि। धेरै वर्ष लगातार दु: ख भोगेपछि, उनले आफ्नो आँखा बन्द गरिदिइन् र हामीलाई छोडिन्, र उनको अन्तिम शब्दहरू भगवानलाई सम्बोधन गरिएको थिएन, तर आफ्ना पतिहरूको हेरचाह गर्न उनको पतिलाई अनुरोध थियो।
म त्यहाँ एक सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो एक असल परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबैलाई बनाउनुभएको छ भन्ने शिक्षासँग मेलमिलाप गर्न असमर्थ थिए। त्यहाँ एक शक्तिशाली शैतान छ जसको लागि परमेश्वर र मानिसहरुको संयुक्त प्रयासको आवश्यक छ भन्ने कुराको तर्कसंगत तर्क गरे।
यस शिक्षाका विश्वासीहरूको अनुभवहरूले स्पष्ट भयो कि त्यहाँ कुनै गल्ती भएको थियो।
जीवन बिरामी र मृत्युको लगातार पुनरावृत्ति देखिन्थ्यो। एक पछि अर्को परिवारमा लगियो, अन्त सम्म मैले निराश हुनलाई राजीनामा गरें। त्यहाँ ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, म सहजसँग जान्दछु। म विश्वास गर्दिन कि कसैलाई पनि उहाँबारे केही थाहा छ, तर जबदेखि म स्त्रीत्वमा पुगेँ, भगवान भेट्टाउने तिर्सना अपारदर्शी थियो। मैले बाइबल खोल्न सक्ने र मानिसको अस्तित्वको कारण, उसको जीवनको उद्देश्य, र त्यो उद्देश्यको पूर्तिमा उसको रक्षा गर्ने कानून प्रकट गर्ने कुरा पत्ता लगाउने विभिन्न चर्चहरूको धर्महरूमा केहि खोज्न खोजेको थिएँ। तर यो खोज व्यर्थ भयो।
कुनै मानिस जो आशाविहीन छ र भगवानलाई नजान्दछ त्यो केवल मरेको चीज हो, यद्यपि मानवीय बुद्धिले पृथ्वीमा हिंड्छ। जीवन मेरो लागि पूर्ण अर्थहीन देखिन्थ्यो, भविष्यको लागि कुनै वचनको किरण बिना।
भगवानले मेरो लागि तयार पार्नुभएको चीजहरूको बारेमा मैले सपना देखेको थिइन, र त्यो मेरा लागि प्रतीक्षा गर्दै थिए। तर एउटा ग्रीष्म तु साँझ न्यु योर्क शहरको सडकमा हिंड्दा मैले एउटा भवन देखेको थिएँ, जसमा "क्रिष्टको प्रथम चर्च, साइन्टिस्ट" भन्ने शब्दहरू थिए। मलाई बोलाइए जस्तै, म सडकमा पार गरेँ र भित्र पसे। यो गवाहीको सभा हो, र त्यहाँ मैले एउटा नयाँ सन्देश सुने, जुन व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छाको कारणले होइन तर ईश्वरको अज्ञानले कष्ट दिन्छ। मैले यो सत्य हो भनेर एकैचोटि देखेको थिएँ कि अज्ञानता मात्र कष्टको कारण हो, मानिसलाई मात्र अन्धो बनाउन सक्ने र उसलाई क्षमता र शक्ति लुट्ने एकमात्र चीज। उनीहरूले भने कि परमेश्वर आमा पनि हुनुहुन्छ र बुबा पनि हुनुहुन्छ, र मलाई यो सत्य लाग्दछ, र आमाले माया र आमाको समझका साथ भगवानले सबै कुरा राम्ररी बनाउनुहुनेछ र बुद्धिमानी र स्वेच्छाले आफ्ना बच्चाहरूलाई आशिष् दिनुहुनेछ। अर्को वक्ताले भने कि यो शिक्षा जीवनको विज्ञान हो र यसले परमेश्वरलाई आत्मा र सृष्टिको रूपमा आध्यात्मिक रूपमा प्रकट गर्दछ, र यो असत्य जस्तो कुरा हो; र यो विज्ञान एक आध्यात्मिक विचारधाराकी महिलाले पत्ता लगाएको थियो जसले यस संसारलाई दिएको थियो।
म त्यो बैठकबाट एक नयाँ जीव, आशाको साथ रमाहट बाहिर निस्के, किनकि मैले देखे कि यदि यो सत्य हो भने, विचारको संसारमा सबै धार्मिक, वा अन्यथा, झूटा आधारमा आधारित थियो र पतन हुनुपर्दछ; र मलाई थाहा थियो कि यदि यो विज्ञान हो भने, यो सिक्न सकिन्छ, र मैले यो सिक्ने निर्णय गरेको थिएँ, र यसरी भगवानलाई भेट्ने र जीवनलाई बुझ्ने। मैले यस शिक्षाको बारेमा कसरी सिक्ने भनेर सोधपुछ गरेँ, र एक च्गाई गर्नेलाई निर्देशित गरियो जो एक शिक्षिका पनि थिइन्, श्रीमती लौरा लाथ्रोप, सी.एस.डी, श्रीमती एड्कीको विद्यार्थी।
धेरै वर्षदेखि म पेटको गम्भीर बिरामीको सिकार भएको थिएँ, जुन वंशानुगत भनियो, र सानै अवस्थादेखि नै मेरो आँखा असफल हुँदै गइरहेको थियो। शव्वादकारहरू सहमत भए कि म चालीस वर्षको उमेर पुग्नु अघि म पूर्णतया अन्धा हुनेछु।
म यस महिला, श्रीमती ल्याथ्रोपसँग गएँ र उनलाई मेरा कठिनाइहरूको बारेमा बताएँ र भने कि म परमेश्वरबारे जान्न चाहान्छु। मेरो दोस्रो भ्रमणको अवसरमा मैले उनलाई मेरो उपचार गर्न समय नलिई आग्रह गरें, किनकि म असाध्यै रोग निको भएको थिएँ र वास्तवमा निको हुन आएको होइन, तर ईसाई विज्ञानले परमेश्वरबारे के सिकाउँछ, र यो शिक्षा कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर सिक्न। मैले सोधें कि यदि त्यहाँ स्कूलहरू छन् जहाँ यो सिक्न सकिन्छ। उनले भनिन् कि त्यहाँ कुनै स्कूल थिएन, तर त्यहाँ कक्षा छन्, र उसले अर्को महिना कक्षा शुरु गर्ने छ, जुन म चाहन्थें भने म प्रवेश गर्न सक्थें।
उनले मलाई मेरी र बेकर एड्डीको सानो किताब 'हो र हो' दिए जुन मैले त्यस साँझ तीन पटक पढें। यसले सबै प्रश्नहरूको उत्तर दियो कि यो शिक्षा स्वीकार्य छ कि छैन, किनकि यसले स्पष्ट देखाउँदछ कि न त राम्रो न त नराम्रो व्यक्तिगत हो, र त्यो मान्छे परमेश्वरबाटको अविभाज्य हो, उसको उत्पत्ति। यो पढाइको समाप्तिमा मैले महसुस गरें कि शारीरिक समस्याहरू पूर्णतया समाप्त भएका थिए। तिनीहरू कहिल्यै फर्किएनन्, यद्यपि मैले धेरै बर्षदेखि मानव शक्ति र सहनशीलता भनिने कार्य भन्दा बाहिर काम गरें। शारीरिक उपचार यस शिक्षाको सत्यताको एक अतुलनीय संकेत थियो, र यो प्रमाणले सदाको लागि शंक र उदासीनता समाप्त गर्न महिमाको विस्टा खोल्यो।
त्यसपछि मैले क्रिश्चियन साइन्स टेक्स्टबुक, साइन्स एण्ड हेल्थ इन द स्क्रिप्चर्स टु द स्क्रिप्चर्स, मेरी बेकर एड्डीले किनें, र एक हप्ता पछि श्रीमती ल्याथ्रोपले सिकाएको कक्षामा प्रवेश गरे, जहाँ मैले थुप्रै उत्थान र प्रेरणादायी भाषणहरूको आनन्द उठाएँ। कक्षाको समापन सत्रमा हाम्रो शिक्षकले हामी सबै क्रिश्चियन विज्ञान चर्चको सदस्य बन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। मैले यस अनुरोधलाई कक्षाका अन्य सदस्यहरूले जस्तै अनुगमन गरे, यद्यपि मैले यसको कारण देखिन, किनकि मैले चर्चको अर्थ के हो भनेर देखेको छैन, न त सत्य स्थापनामा यसको महत्त्व नै छ। बीचका वर्षहरूमा, क्रिष्ट अफ क्राइस्ट, साइन्टिस्ट, मेरो घरको सबैभन्दा शुद्ध अवधारणा हो र मैले बुझें कि यो मानव चेतनामा परमेश्वरको राज्यको उच्च अभिव्यक्ति हो।
त्यो पहिलो जाडो खुशी थियो। मैले पाठ्य पुस्तक, विज्ञान र स्वास्थ्यको साथ धर्मशास्त्रको चाबी पढें, हरेक दिन धेरै घण्टा र दिउँसो सम्म र चर्चले परमेश्वर र उहाँको उद्देश्यको लागि काम गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।
मैले यो पढें कि पढ्ने कोठाहरू केवल दिनको समयमा नै खुला रहन्छन् र यदि तिनीहरू बेलुका खोल्न सक्दिनन् भनेर सोधे, जुन दिनको रोजगारीमा आएका धेरै व्यक्तिलाई यस विज्ञानको बारेमा आउने र जान्ने अवसर दिनको लागि थियो। हाम्रो पढ्ने कोठा तुरुन्त खोलियो र साँझमा मेरो चार्जमा राखियो, र यसैले क्रिश्चियन साइन्सको कारण एक कार्यकर्ताको रूपमा मेरो गतिविधि शुरू गर्यो। यस कार्यमा त्यहाँ धेरै राम्रा अनुभवहरू थिए, र धेरै व्यक्तिहरूले त्यो साँझ त्यो कोठामा आएर भगवानलाई भेट्टाए।
मैले एक वर्ष भन्दा पहिले ईसाई विज्ञान भेट्टाएको थियो। यो परमेश्वरबाटको उपहारको रूपमा आएको थियो र यसले आशाविहीन जीवन ईश्वरीय प्रतिज्ञामा ल्यायो। यसले मलाई कारण हुनु, गतिविधि र उपयोगिताको एक गौरवशाली संभावना प्रदान गर्‍यो।
मलाई यो सत्य मन पर्‍यो र मलाई आशा छ कि म अझ बढि ज्ञान र क्रिश्चियन विज्ञानको लागि उपयोगी हुन सक्छु, तर मलाई यो विज्ञानलाई विदेशी भूमिमा लैजान र त्यहाँ स्थापना गर्ने जस्ता मिसनरी कार्यको लागि विचार गरिनु पर्छ, यो एक असम्भव कुरा देखिन्थ्यो। यद्यपि, मेरो शिक्षकले मलाई त्यसो गर्ने निर्देशन दिनुभयो।
मैले उनलाई अहिलेसम्म इसाई विज्ञानको बारेमा केही पनि थाहा नभएको कुरा सम्झाउँथें, र त्यहाँ वृद्ध विद्यार्थीहरू थिए जुन राम्रोसँग सबै किसिमले तयार थिए, तर उनले मलाई आवश्यक योग्यताहरू जोड दिएकी थिइन। मैले उनलाई भनेको थिएँ कि मलाई कसरी उपचार दिने भनेर जान्दिन, तर उनले भनिन्, "कुनै आपत्ति नमान, तपाईसंग प्रेम छ, र आज्ञाकारीता र ईमानदारीका गुणहरु छन्, र ती तपाईहरु लाई गराउँनेछन्; र परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनुहुनेछ। ”
त्यसोभए मैले भनें कि मलाई जर्मनको एउटा शब्द पनि थाहा छैन, र मसँग पैसा छैन जोसँग विदेश जाउँथे र विदेशी शहरमा बस्न सक्थे।
उनले तुरुन्तै यी आपत्तिहरूलाई हटाई, र मलाई आश्वासन दिन्छ कि जर्मनीमा सबैजना अंग्रेजी बोल्छन्। पछि मैले यो गल्ती भएको पाए चर्चका एक सदस्यले यात्रा गर्न र म जर्मनीमा पुगेको केही समयको लागि मलाई हेरचाह गर्न पैसा .ण दिए। मैले सकेसम्म यति चाँडो ब्याजको साथ यो पैसा फिर्ता गरें। यो गाह्रो थियो, तर ईश्वरीय प्रेमले मलाई सम्हाल्यो। मेरो भौतिक आवश्यकताहरू थोरै थिए, र म कुनै वित्तीय दायित्वबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्थें।
यस समय सम्म मैले कुनै उपचार कार्य कहिले गरेको थिइनँ, तर दुईवटा घटनाहरू मसँग आए जब मैले कललाई आज्ञाकारितामा जाने वचन दिएँ। तीमध्ये एक जर्मन-अमेरिकी महिला थिइन् जो १२ वर्ष बित्तिकै पीडित थिइन्। उनले भनिन् कि धेरै वर्ष अघि पहिलो सम्राट विल्हेल्मको अन्त्येष्टि कार्यक्रम हेर्न बारम्बार घण्टा खडा भएर यस्तो भएको थियो। उनी हाम्रो एक मात्र अन्तर्वार्ताको बेला निको भइन्। मैले उनलाई उपचार गरिन, तर केवल रोगको केही चीज र त्यसमा उनको विश्वास देखाउँदा उनले मलाई कथा भने। म यस मुद्दाको बारेमा भन्छु किनकि जर्मनीमा बाँच्नका लागि मसँग वाइमेटिज्मका धेरै घटनाहरू भए जसमा विश्वास गरिएको थियो कि उनीहरू एकै समयमा र उही तरीकाले संकुचित भएका थिए र ती सबै निको भए।
अर्को घटना क्यान्सरले गर्दा मरेकी एउटी वृद्ध महिलाको हो। उनी दुई चोटि निको भइन्, र सम्पूर्ण रूपमा हेर्दै र अस्तित्वको सत्यताबाट आवाज उठाउँदै। मेरो आनन्द धेरै ठूलो थियो जब उनी एक हप्ता पछि मलाई जहाजमा देख्न आए। यी घटनाहरूले मलाई साहस दियो किनकि मलाई थाहा थियो कि ममा केही पनि यी कामहरू गर्न सक्दैन। केवल परमेश्वर आफैले यी भयानक छायाहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्थ्यो।
म डिसेम्बर, 1897 मा दिउँसो न्यु योर्कबाट नौ दिनको स्टीमरमा ह्याम्बर्गको लागि यात्रा गर्दै थिएँ। हामी तेह्रौं दिनसम्म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेनौं, जब हामी चार दिनसम्म चलेको आँधीबेहरीमा गयौं र जहाजबाट ल ्गडा पारेको र कार्गोलाई धेरै नोक्सान पुर्‍याउँदै हामीलाई धेरै माईलहरू उडायो। यो यति गम्भीर थियो कि कार्गोमा भएका थुप्रै बहुमूल्य घोडाहरू घाइते भए ताकि तिनीहरूलाई गोली हानेर मारियो, यद्यपि उनीहरूलाई बचाउन हर प्रयास गरिएको थियो।
यात्रुहरू उनीहरूको बर्थमा उनीहरूको सुरक्षाको लागि बोल्डरमा भरिएका थिए, र तिनीहरूलाई बाहिर फ्याँकिने गरी पक्रियो, तर हेरचाह गरिएको हेरचाहको बाबजुद पनि, तिनीहरूको संख्यामा फ्याँकियो र गम्भीर चोटपटक लाग्यो। यो जाडो मध्य हो, त्यहाँ केहि प्रथम श्रेणीका यात्रुहरू थिए, जसमध्ये धेरैजसो समुद्रमा असुरक्षित र डरले भरिएका थिए। यो सागरमा मेरो पहिलो यात्रा थियो, र, तर यो दृढ विश्वासको लागि कि परमेश्वरले मलाई जर्मनीमा आफ्नो काम गर्न बोलाउनुभएको थियो, र उहाँको उपस्थिति मसँग थियो र मलाई सबै परिस्थितिमा सँभाल्ने र रक्षा गर्ने छ, यो हुने थियो डरलाग्दो अनुभव; तर कहिले पनि मलाई डरको कुनै विचार थिएन, र एक भण्डारेको सहयोगमा म खानामा गएँ, र आँधीबेहरी हिंस्रक भए पछि टेबलमा एक्लै यात्री थिए। राती मेरो बर्थमा फसेको भए पनि मैले आफ्ना पुस्तकहरू पढ्न र प्रार्थना गर्दा ख्रीष्टलाई खोज्ने प्रयास गरें।
मैले यात्रा गर्नु भन्दा ठीक अघि, श्रीमती एड्डीले यस क्षेत्रलाई नयाँ पुस्तक, विविध लेखहरू दिएकी थिइन, जुन पत्रहरू र ठेगानाहरू मिलेर बनेकी थिइन्। उनले घोषणा गरे कि यो पुस्तक क्षेत्रका लागि एक मात्र शिक्षक बन्ने थियो, र दुबै शिक्षक र विद्यार्थीहरूले यसको अध्ययन गर्नुपर्दछ र यस प्रकारले चिठी र क्रिश्चियन साइन्सको आत्माको ज्ञान लिनु पर्दछ। मैले "स्वर्गबाट ​​आएको आवाज", "यसलाई लिनुहोस् र खाइदिनुहोस्" को आदेशको पालना गर्दै यो पुस्तक धेरै नै छिटो पढ्नुहोस्। (प्रकाश 10:9) त्यहाँ पाइएको सत्यता र पाठ्यपुस्तकमा मेरो सोचाइ यति उज्यालो भयो कि यसले परमेश्वरको शान्तिमा तुफानको माथि उठायो।
आँधीको चौथो दिनमा मैले यात्राको पहिलो दिनहरूमा मेरो एक टेबल सहयोगीले हस्ताक्षर गरेको एउटा नोट पादरीकी पत्नीले पाइन र उनी भन्छिन् कि त्यस बेलुका धेरै केटीहरू आउन सक्छन्। तिनीहरू आए, भण्डारीहरूले सहयोग गरे, र हामी वरिपरि सोफे र भुइँमा बसे। तिनीहरूले मलाई भने कि तिनीहरू आईपुगे किनभने म बोर्डमा एक मात्र व्यक्ति थिए जसलाई कुनै डर छैन जस्तो देखिन्थ्यो, र तिनीहरू मलाई चाहन्थे कि म कसरी त्यस्तो आँधीबेहरीको बीचमा खुशी हुन सक्छु भनेर मलाई बताउन, जहाज तल जान सक्छ भनेर जान्न। कुनै पनि पल मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ, "जहाज तल जाने छैन।" उनीहरूले सोधे कि कोही पनि कसरी पक्का हुन सक्छ। मैले तिनीहरूलाई भने यो एकदम अनमोल र पवित्र रहस्य हो तर उनीहरूले चाहेको खण्डमा म तिनीहरूलाई बाँड्न सक्छु, कि भगवानले मलाई महिमित युरोपमा युरोप पठाउँदै हुनुहुन्छ, र उहाँ पक्कै पनि मलाई बाटोमा डुबाउनुहुन्न। उनीहरूको अनुरोधमा मैले उनीहरूसँग क्रिश्चियन साइन्सको बारेमा एक घण्टा कुरा गरें, तिनीहरूलाई साधारण आधारभूत सत्य बताएँ र येशूको शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गरें, र उनीहरूलाई आफ्नो "शान्ति, चुप लागेर बस्नुहोस्" संग आँधीबेहरी पार गर्ने कथा तिनीहरूलाई पढें। हामी अब यस विषयमा महत्त्वपूर्ण सोचमा परेका थिएनौं, तर ख्रीष्टको आवाजलाई पुरानो भनाइको रूपमा सुन्दै थियौं: “खुशी होऊ, यो म हुँ। नडराऊ” (मार्क 6:50). तिनीहरू अब डराउँदैनथे; सत्यको आत्मा तिनीहरूको हृदयमा प्रवेश गरेको थियो; र अचानक तिनीहरूमध्ये एक जनाले यस्तो उद्गार गरे: “यो शान्त छ। आँधीबेहरी बन्द भयो! " यो समाप्त भएको थियो, र विस्मयका साथ तिनीहरू उठे र चुपचाप आफ्ना केबिनमा गए।
दुई दिन पछि कप्तान मकहाँ आए र भने कि त्यहाँ एक लगभग सर्वसम्मत अनुरोध छ कि अर्को दिन सैलुनमा आइतवार सेवा सञ्चालन गर्नु पर्छ। पहिलो पाठक र दोस्रो पाठक दुबैको अंश लिएर मैले त्यसो गरें, किनकि त्यहाँ कुनै अन्य क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरू थिएनन्। दुई पादरीहरू र दुई चिकित्सकहरू, उनीहरूका पत्नीहरू सहित, उपस्थित थिए। सबैले मलाई पढ्नको लागि धन्यवाद दिए, र तीनले मेरी बेकर एड्डी द्वारा टेक्स्टबुक, साइन्स एण्ड हेल्थ विथ द स्क्रिप्चर्स टु द स्क्रिप्चर्स कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर ठेगाना मागे। वर्षौंपछि मलाई थाहा भयो कि ती दुई महिलाहरू सक्रिय क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरू बनेका थिए।
समुद्री बन्दरगाहबाट ड्रेस्डेनको लागि यात्रा गर्दा म कुनै पनि भाषा बोल्न नसक्ने भएकोले मैले कुनै खानेकुरा किन्न सकेन। बिहीबार दिउँसोदेखि शुक्रवार राती अबेर सम्म मसँग केही खानेकुरा थिएन। खाना खाने मेरो इच्छा व्यक्त गर्दै रेल रोक्दा म मानिसहरूसँग कुरा गर्थें, तर कोहीले अ ,्ग्रेजी बुझ्दैन जस्तो देखिन्थ्यो र म ट्रेन छोड्न सक्दिन, नत्र यो म बिना नै जान्छ।
म शुक्रबार साँझ ड्रेस्डेनमा पुगें, र मिस इमिली कटनले राखेको पेन्शनमा गएकी थिइन, एक जना बेलायती महिला। उनले मलाई एक कप चिया र पातलो ब्रेडन्ड-बटर स्यान्डविच दिइन्, र म अत्यन्त भोकाएको तीर्थयात्रीलाई ओछ्यानमा गएको थिएँ तर प्रेमले मलाई बोलाएको काम गर्ने ठाउँमा पुगेर म धन्यवादी छु।
एक युवती अमेरिकी महिला जसले ड्रेस्डेनमा गीत गाउँदै अध्ययन गरिरहेकी थिइन र उनले यस पेन्सनमा खाना पकाइन्, विज्ञान र स्वास्थ्यको एक प्रति थियो र उनी इसाई विज्ञानको बारेमा बढी बताउन सक्ने कसैलाई भेट्न रुचाउँछिन्। आइतवार बिहान मेरो आगमन पछि म उनको कोठामा गएँ र हामी पाठ सँगै पढ्छौं।
जब हामी सकिसकेका थियौं, हामी कुरा गर्दै थियौं, र हाल ढोकामा एक र्याप थियो र अर्को अमेरिकी महिला भित्र छिरेकी थिइनन् कि उनले एक जना इसाई वैज्ञानिकको खोजी गरिरहेकी छिन्। उनले भनिन् कि उनी मार्क ट्वेनकी सानी बहिनी थिइन र धेरै वर्ष अघि ईसाई विज्ञानको सेवाबाट उनको छोरीलाई क्षयरोगबाट निको पारिएको थियो। एक जवान रूसी केटी जो उनीसँग पेन्सनमा बसिरहेकी थिइन। उनको ठूलो गम्भीर बिमारीले गर्दा उनी ठूलो समस्यामा परेकी थिइन। ती केटीले मस्कोमा रोयल ओपेराको लागि अध्ययन गरिरहेकी थिई र चिकित्सकहरूले उनलाई एक वर्षको / भागमा फेरि गाउन नसक्ने खबर दिएका थिए र हुन पनि कहिल्यै पनि सकेन। उनी निराश थिइन्, र यस मायालु अमेरिकी महिलाले परिचारिकालाई उनको शोकको कारण सोधिन्। केटीलाई कुनै मानवीय सहयोग नभएको कुरा बताउँदा यी महिलाले आफ्नो परिवारमा क्रिश्चियन साइन्सले ल्याएको निको पार्ने कुरा सम्झिन् र उनी अमेरिकी चर्चमा रेक्टरको बारेमा सोधपुछ गर्न गइन् कि त्यहाँ ईसाई विज्ञान उपचार गर्ने व्यक्ति छ कि छैन? सहर। उनले भने कि उनी कसैलाई चिन्दैनन्, तर एक जवान म्यूजिक विद्यार्थीले उनलाई क्रिश्चियन विज्ञानमा रुचि रहेको बताएका थिए र उनले सोचे कि उनलाई शहरमा कोही ईसाई वैज्ञानिकहरू छन् कि भनेर थाहा छ। उनले उसलाई युवतीको ठेगाना दिए र उनी हाम्रो पहिलो आइतवार सेवाको नजिकै आए। उनले घोषणा गरी कि उनी यस बिरामी केटीलाई निको पार्न कसैलाई खोज्दैछिन् र मेरो परिचारिकाले एकैचोटि भनिन्, "यहाँ एउटी आइमाई छ जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको छ।
प्रबन्धहरू गरियो, र सोमबार बिहान रूसी केटी मेरो पेन्सनमा आई। उहाँ केवल रूसी भाषा बोल्नुहुन्थ्यो र मलाई अंग्रेजी मात्र आउँथ्यो, त्यसैले मैले मेरो परिचारिकालाई बोलाएँ जसले धेरै केटीसँग कुरा गर्थिन्। त्यसोभए, मतिर आश्चर्य चकित हुँदै फर्केर उनले अमेरिकी महिलाले मलाई भोलिपल्ट भन्नुभएको कुराको बारेमा बताइन्। मैले उनलाई केटीलाई बस्न आग्रह गर्न आग्रह गरें र जर्मनीमा पहिलो चोटि उपचार गर्न म बसे। मेरो परिचारिका त्यसपछि सेवानिवृत्त। मलाई इसाई विज्ञान उपचार गर्ने विधिको बारेमा केही थाहा थिएन, तर बुद्धिको लागि ईश्वरतिर फर्कें, र मैले सर्वशक्तिमान्‌त्व देखेपछि मेरो सोचाइबाट त्रुटि द्रुत रूपमा हरायो। म उठें र सानी केटीलाई बिदाइ गरे। उनी हरेक बिहान पाँच दिनसम्म आउँथिन्। पाँचौं दिनमा उनी एकदम स्वेच्छाले बोल्छिन्, र मैले फेरि मेरो नर्सि लाई बोलाइन कि उसले के भनिरहेकी छ। ती केटीले भने कि उनी एकदमै ठीक थिईन्, र पहिलो उपचारकालदेखि यस्तै भैरहेकी थिई, र उनी गाउँदै गाउँदै गइन्। जब उनले सोधे किन उनले त्यस्तो भनेकी थिइनन्, उनले भनिन् कि उनलाई थाहा छैन कि उनले मलाई भन्नु पर्छ र यसले उनलाई खुशी भई आयो।
त्यसपछि उनले सोधिन् कि उनी फेरि इस्टरमा आउन सक्छिन्। मैले किन भनेर सोधिँदा, उनले भने कि उनले त्यसपश्चात उनका परीक्षाहरू लिने छन्, र यदि उनी उत्तीर्ण भइन् भने उनका बुबाले उनलाई अध्ययन पूरा गर्न र ओपेरा सगाईको लागि तयारी गर्ने अनुमति दिनेछन्, तर यदि उनी असफल भए भने, उनी घर जानु पर्दछ र उनको क्यारियर छोड्नुहोस्। मैले सोचें कि उनले के भन्न खोजेको हो भनेर मैले बुझें, तर उनीले यो अभिव्यक्त गरोस् भन्ने चाहन्थे, र हाम्रो दोभाषेलाई भने, "उनलाई सोध्नुहोस् कि मैले यसको के गर्नु पर्छ।" चम्किलो अनुहारको साथ यस युवतीले यस्तो जवाफ दिइन्: "डरले बाहेक अरू कोही पनि मेरो परीक्षामा सफल हुन सकेन, र ती महिलाले मेरो बारेमा भगवानसँग पहिले कुरा गरिसके पछि मलाई कुनै डर थिएन; मलाई डर लाग्दैन कि उनी मेरो लागि प्रार्थना गर्छिन्। " उनलाई इसाई विज्ञानको केही पनि भनिएको थिएन; उनलाई भनेका सबै कुरा, उनलाई बस्न आग्रह नगरी, उनी पूर्णरूपमा निको नभएसम्म उनी दिनहुँ आउने गर्थिन्। निस्सन्देह, यो हाम्रो नेताको अर्थ के हो भन्ने कुराको प्रदर्शन हो जब उनी भन्छिन् कि क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरूले "उपचार गरेर" सिकाउनु पर्छ। (विविध लेखन 358:4), किनभने यस केटीले यो थाहा पाए कि उनलाई ईश्वरले निको पार्नुभएको थियो, र त्यो "पूर्ण प्रेमले डरलाई निम्त्याउँदछ।"
यस घटनाको सम्बन्धमा एउटा उल्लेखनीय कुरा यो हो कि मेरी परिचारिका, मिस कटन, रूसमा जन्मिएकी थिइन र उनको जीवनको पहिलो पच्चीस वर्ष त्यहाँ बस्थे। उनी युरोपमा मैले भेटेको एउटी अ ्ग्रेजी महिला थिइन जसले रूसी भाषा जान्ने थिइन। यो उनको मातृभाषा थियो, यद्यपि उनी अंग्रेजी नागरिक थिइन। यो केटी मकहाँ आए पछि म उनको घरमा पाहुना हुनुपर्दछ भन्ने ईश्वरीय मार्गनिर्देशनको सकारात्मक प्रमाण थियो। केटीको नाम फेलिशिटा थियो जसको अर्थ हो "आनन्द।" यो खुशीको आभास थियो।
किनकि यो पेन्सन मुख्यतया साना केटी, विद्यार्थीहरूको लागि थियो, म छिट्टै अर्को ठाउँमा सरे जहाँ मेरो स्थायी घर हुन सक्छ। यस निवृत्तिभरणमा अठार जना पाहुनाहरू थिए, जसमध्ये प्रायः अमेरिकीहरू थिए। परिचारिकाले उनीहरूलाई भनिन कि म एक इसाई वैज्ञानिक हुँ। यस समयमा क्रिश्चियन साइन्सको बारेमा थोरै मात्र ज्ञान थियो र हुनसक्छ कि त्यहाँका अमेरिकीहरूले मलाई अट्टेरी ठानेका थिए, किनकि तिनीहरूले मलाई बेवास्ता गरे र मलाई पूर्णतया मानवीय सहयोग बिना छोडे। यो एक्लोपन थियो र म घरकै रोगबाट ग्रसित थिएँ। दिनको समयमा मैले राम्रो गर्न सकिनँ किनकि म आफ्ना पुस्तकहरू अध्ययन गर्थें र परमेश्वरको वातावरणमा बस्थें, तर रातमा एकाकीपनले मलाई निद्राबाट ब्यूँझाउँथ्यो र धेरै चोटि म एउटा हातमा मैनबत्तीको साथ भुइँमा हिंड्थें र विज्ञान र स्वास्थ्यमा। अर्को, ठूलो स्वरले पढिरहेको छ जबकि मेरो आवाज संग निस्सक्रिय थियो। मेरो सबैभन्दा ठूलो चाहना थियो कि मैले ख्रीष्टलाई भेट्न सकौं, किनकि ख्रीष्टको बारेमा मेरो धारणा एकदमै धमिलो थियो, त्यसैले मैले श्रीमती एड्डीको लेखहरू र नयाँ नियममा दिनको बाह्र वा चौध घण्टा अध्ययन गरें।
मलाई पूरै युरोपमा कसैलाई थाहा थिएन, र अमेरिकामा थोरै मानिस मात्र म त्यहाँ थिए भनेर जान्दछन्, प्रश्न थियो, भगवानले मलाई पठाउनु भएको काम मैले कसरी भेट्ने? तर जब यो प्रश्न मलाई आयो, त्यहाँ उत्तर आयो गुरुले दिएका जस्तै: "खेतहरू सेता छन्"; फसल तयार छ र म तयार छु। परमेश्वरले मलाई उहाँको काम गर्न यहाँ ल्याउनु भएको छ, र त्रुटिले मलाई खोज्नबाट रोक्न सक्दैन। तिनीहरूले मलाई पाउनेछन्, र परमेश्वरले मलाई निको पार्ने समझ दिनुहुन्छ।
छोटो समयमै एपिस्कोपल गिर्जाघरका रेक्टरले एक जना नोकरलाई मेरो लागि एक साँझ नौ बजेतिर पठाए। म उहाँ कहाँ गएँ र उनले मलाई भने कि उनी ब्राइटको रोगबाट ग्रसित थिए। त्यो भन्दा पहिले उनलाई दुई गम्भीर आक्रमण भएको थियो, र चिकित्सकहरु उनलाई चेतावनी दिए तेस्रो घातक हुनेछ। उनले विज्ञान र स्वास्थ्य पढेका थिए, र क्रिश्चियन साइंसको आवश्यकता पूरा गर्ने छ कि छैन भनेर हेर्न इसाई साइन्टिस्ट शहरमा रहेको सुने। उसले मलाई साँझको बजेतिर उसलाई भेट्न भन्यो, किनकि उनी आफ्ना सहयोगीहरूलाई थाहा नपाउन सक्छन् कि उनी यो स्रोतको लागि सहयोगी थिए। उहाँ एक पन्ध्र दिन भन्दा पनि कममा निको भए, र अत्यन्तै रमाए, तर खुल्लमखुल्ला स्वीकार्ने आँट गरेनन्, त्यसैले उनी चुपचाप अध्ययन गर्न थाले र चर्चको कामलाई निरन्तरता दिए।
तीन महिनाको व्यग्र खोजी पछि मैले ख्रीष्टलाई भेट्टाएँ, श्रीमती एड्डीले भने जस्तै। जाडोको हिउँदको दिउँसो म मेरो बाइबल अध्ययन गर्न बसे र त्यसपछि हाम्रा नेताको विविध लेखहरूमा फर्कें, उनको शब्दहरू सम्झना गर्दै, "यो खण्ड पाठकलाई एउटा ग्राफिक गाईडबुक हुन सक्छ, नदेखिने डेटि ,्ग गर्दै, नदेखिने डेटि, गर्न र उनलाई अबाधित हिंड्न सक्षम तुल्याउने विज्ञानको हालसम्म अन्वेक्षित क्षेत्रहरू " (विविध लेखन, उपसर्ग 9:11-17). केही समय पढिसके पछि म झ्यालमा गएँ र वर्षा बगैंचामा बगैंचामा हेरेँ र येशूका यी शब्दहरूमा ध्यान दिएर भने, "म आएँ ताकि तिनीहरू जीवन पाउन सकून् र तिनीहरूले अझ प्रशस्त मात्रामा पाउन्।" अनि मसँग येशूले एउटा फ्लश जस्तो देख्नु भयो जुन सत्य प्रकट भयो। त्यो सत्य हो, परमेश्वर संगको मानिसमा एक हुनु, जीवन। पहिलो पटक मैले श्रीमती एड्डीको भनाइको अर्थ देखे, "मानिस ईश्वरको अस्तित्व हो" (विज्ञान र स्वास्थ्य, 470:23), र यो सत्य विश्वव्यापी मुक्तिदाता हो, र यसको उपस्थितिमा हर प्रकारका त्रुटिहरू अदृश्य हुनुपर्दछ जस्तो कि अन्धकार उदाउनु अघि रोकिन्छ।
त्यस समयदेखि बाटोमा खोलियो। धेरै दिशाबाट मानिसहरू सहायताको लागि आएका थिए। केही जर्मनहरू रूसी गायकलाई निको पारेर आएका थिए, त्यसपछि एक जवान नर्वेली पादरी, जसले आफ्नो साथीद्वारा जहाज कप्तान थियो र अमेरिकाको यात्रामा क्रिश्चियन साइंस सिकेको थियो। यस पादरी धेरै वर्षदेखि बिरामी र आफ्नो काम गर्न असमर्थ थिए। चिकित्सकहरूले उनलाई स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकेका थिएनन्। उनका समुद्री मित्रले अमेरिकामा बस्ने आफन्तहरू मार्फत क्रिश्चियन विज्ञान र यसको उपचार कार्यको बारेमा सुने। उनले उनीहरूको बारेमा सोधपुछ गरे कि एकजना च्गाईकर्ता कहाँ पाउन सकिन्छ र मलाई ड्रेस्डेनमा मेरो उपस्थितिको बारेमा थाहा भयो। उक्त जवान पादरीले मलाई भने कि उनी सबैभन्दा पहिले यो ख्रीष्ट शिक्षा हो र निको पार्छ भन्ने कुरामा पक्का हुन चाहन्छन्; यदि उसले यो भेट्टाएमा, नर्वेका उनका छजना साथीहरू उहाँलाई पछ्याउँथे, किनकि उनीहरूलाई मद्दतको खाँचो परेको थियो, तर यो उनीहरू ख्रीष्टको हो भनेर पक्का नभएसम्म उहाँ आउन भन्नुहुन्न थियो। उहाँसँग काम गर्नु एउटा सुन्दर अनुभव थियो, किनकि उसलाई धर्मशास्त्र थाहा थियो र ती प्रेम गर्थे, र ख्रीष्टलाई प्रेम गर्थे। उनले धेरै बौद्धिक प्रश्नहरू सोधे। यसले मलाई मास्टर र हाम्रो नेताको शिक्षामा निरन्तर परिवर्तन गर्यो। उनी चाँडै नै सन्तुष्ट भए र आफ्ना साथीहरूलाई बोलाए।
तिनीहरू विभिन्न पेन्सनमा बसे, र उनीहरूले किन सँगी बोर्डरहरूलाई आयो भनेर बताए पछि उनीहरूको मुद्दा धेरै मानिसहरूले चासो देखाए। सबै निको भए, र यसले क्रिश्चियन विज्ञानको उपचार शक्ति ड्र्रेस्डेनमा प्रख्यात हुनको लागि बाटो खोल्यो। धेरै जना उत्तरबाट आएका यी मानिसहरूका गवाहीबाट आएका थिए। अरू टाढाबाट आएका थिए - एक इटालीबाट आएका थिए, अर्को फारसबाट। यी तिनीहरू आए किनकि उनीहरूले सुनेका थिए कि ड्रेस्डेनमा एउटी अमेरिकी महिला थिई जसले ख्रीष्टले जस्तै निको पार्नुभयो। यी अफवाहहरू पत्ता लगाउन असम्भव थियो; तर जब आवश्यकता ठूलो भयो, वचन दिइयो, र ग्रहणशील विचार तुरुन्तै पालन गरियो र ख्रीष्टको उपचारको खोजीमा आयो।
एक जना अ ्ग्रेजी महिला, जसले म बसेको पेन्सन किन्जेमा मेरो कोठामा राखिएको सेवाहरूमा भाग लिइन्, र जो इसाई विज्ञानको गहन विद्यार्थी भइसकेका थिए, उनले मलाई आएर आएर उनको पेन्शनमा बस्न आमन्त्रित गरे जहाँ म बढी कोठा र बढी स्वतन्त्रता पाउन सक्दछु। उनले सेवाका लागि उनको ड्राइंग कोठा प्रस्ताव गर्छिन् र मलाई सिटिंग कोठा र सुत्ने कोठा दिए जुन मैले एउटा कोठाको लागि तिर्दै थिए। मैले उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरें र १ 18 8 को वसन्तको शुरुतिर सर्‍यो। मेरो सिट कोठा श्रीमती एड्डीको सबै पुस्तकहरू र बाइबलसँग मिल्दोजुल्दो थियो र क्रिश्चियन साइंस जर्नल र क्रिश्चियन साइन्स साप्ताहिकको सँधै हालको स .्ख्या थियो। पछिल्लो भर्खरै शुरू गरिएको थियो र पछि क्रिश्चियन साइंस सेन्टिनेल भयो। यो कोठा यूरोप मा पहिलो क्रिश्चियन विज्ञान पठन कोठा बन्यो।
जवान पादरी हेर ब्रुनको गवाहीबाट केही महिना पछि मलाई नर्वे बोलाइएको थियो र क्यान्सरको अवस्थालाई निको पार्नको लागि। दुई जना अ ्ग्रेजी महिलाहरू पनि थिए जो क्रिश्चियन विज्ञानका विद्यार्थीहरू भए। यो सामान्य अवस्थामा २ दिनको यात्रा हो, तर बाक्लो कुहिरोका कारण यस पटक पाँच दिनको आवश्यक पर्‍यो।
बिरामी, एक महिला, एक अस्पताल लगिएको थियो जहाँ चिकित्सकहरूले यो केसको शल्यक्रियाको लागि धेरै टाढा भएको घोषणा गरे किनभने गर्भाशय लगभग पूरै नष्ट भइसकेको थियो। नर्वेको नर्वे माछा मार्ने गाउँका अरू चारजनाले (हौगेसुन्ड) "क्राइष्ट हिलर" आएको सुनें र उनीहरूलाई पनि यो सेवा लिन भन्यो। यस गाउँमा दिन बस्दा चार जना निको भए तर मैले दुई महिनासम्म क्यान्सरको केसमा काम गरिरहें। परिणाम पूर्ण चिकित्सा थियो, यद्यपि यस बीचमा म अमेरिका गएँ। तर परमेश्वरको वचन दुष्टको निम्ति विनाशको कानून हो चाहे त्यो टाढा होस् वा नजिक। यो उपचार पूर्ण दुई वर्ष पछि प्रमाणित भयो जब पहिले बिरामीले एक छोरालाई जन्म दियो। न त उनी न उनको परिवारका कुनै सदस्यलाई न ्ग्रेजी बाहेक अ ्ग्रेजी वा अन्य कुनै भाषाको शब्द थाहा थिएन त्यसैले उनीहरूले न त पाठ्यपुस्तक पढ्न सके न ख्रिश्चन विज्ञानको शब्द सुन्न सके।
यो गाउँमा मेरो सबै अनुभव को सबै भन्दा पवित्र घटनाहरु भयो। मेरा दुई जना सहयात्रीहरूसँग म जवान पादरी हर ब्रुन र उनको भाइ, जो फूलवाला थिए, घरमा खाना खान गए। खानाको अन्त्यमा, सानो बैठक कोठामा फर्कंदा हामीले चार पर्खालहरूको वरिपरि गम्भीर देखिने मानिसहरू देख्यौं। समूहमा केवल अ ्ग्रेजी सिक्नेहरू मात्र मेरो होस्ट र एउटी महिला थिए जसले उनको युवावस्थामा विद्यालयहरूमा अंग्रेजी पढाउँथे। मैले उनीसँग कुराकानी सुरु गरें, उनीहरूको पहाडहरूको भव्यताबारे कुरा गर्दै, र भने कि तिनीहरू पक्कै यस्तो सुन्दर देशका आनन्दित मानिसहरू हुनुपर्दछ। उनले भनिन् कि उनीहरु अत्यन्त विचित्र मानिसहरु थिए। त्यसपछि मैले भने कि म यस्तो हुन सक्छु, किनकि पहाडहरू यति अग्लो थिए कि सूर्यको किरण बन्द गरेर धेरै जसो गर्मीमा पनि छायाँमा छोडिन्थ्यो र उनीहरूको लामो अँध्यारो जाडोले त्यो थप्नेछ। उनले यस्तो जवाफ दिइ: “अहँ, त्यस्तो हुँदैन। यो हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उदास बनाउनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर जसको श्रापले आशा र आनन्दको सूर्यलाई हटाउँदछ र आफ्ना मानिसहरूलाई कष्ट र रोगहरू पठाउँदछ। ” मैले तुरुन्तै जवाफ दिएँ: “ओह, अह, त्यस्तो परमेश्वर छैन। परमेश्वरले मात्र असल, आनन्द र आशिष्‌ पठाउनुहुन्छ। ”
मैले ईसाई विज्ञानमा प्रकट भए जस्तै परमेश्वरबारे कुरा गरिरहें, र स्वास्थ्य र जीवनमा हामीले यो कसरी प्रदर्शन ग ्यौं भनेर बताएँ - क्रिष्ट येशूद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको प्रशस्त जीवन। लूकाले रेकर्ड गरेझैं मास्टरका यी शब्दहरू शरद साँझको सुदूर उत्तरको त्यो सानो फूल भएको कोठामा पूर्ण रूपमा प्रमाणित भयो: “कसरी वा के जवाफ दिने वा के भनौं भनेर चिन्ता नगर: पवित्र आत्माको लागि के तपाईंले भन्नु पर्छ के एकै घण्टा मा सिकाउन हुनेछ " (लूका 12:11-12). मैले त्यहाँ सत्य कुरा भने जुन मलाई पहिले कहिल्यै थाहा थिएन।
केहि समय पछि मेरो ध्यान एक मानिससँग आकर्षित भयो जुन एकदमै बौद्धिक अनुहार भएको मानिस जस्तो देखिन्छ कि ऊ बोल्न चाहन्छ। मैले मेरो होस्टलाई सोधें कि के उक्त भलादमीले केहि सोध्न चाहान्छन्, र उनले जवाफ दिए, "उसलाई अ ्ग्रेजी थाहा छैन।" मैले अनुरोध गरे कि उसले के सोध्न चाहन्छ। उसले त्यसो गर्यो, र त्यसपछि उनीहरू बीच एनिमेटेड कुराकानी सुरु भयो, तीन वा चार अन्य मानिसहरु सामेल भए। हाम्रो युवा पाहुनाले भने, "तर तिनीहरूले तिमीलाई बुझेका छन्। उनीहरूलाई अ ्ग्रेजीको शब्द पनि थाहा छैन, र तिनीहरूले परमेश्वरबारे तपाईंले भनेका कुरा पनि तिनीहरूले बुझे। ” सबै उठेर शिर झुकाए र मेरो अ ्ग्रेजी साथीहरू मिस मिस बेन्टिक बिचले श्रद्धापूर्वक भने, "र प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूलाई आफ्नै भाषामा बोलेको सुन्दा" (कार्यहरू 2:6).
यो एक गौरवशाली क्षण थियो, र तीस बर्ष भन्दा बढी बितेको पछि पनि म यसबारे सोच्न सक्दिन, ख्रीष्टको उपस्थितिको भावनालाई महसुस गर्छु।
यो शनिबारको साँझ हो र अर्को बिहान म हेर ब्रुनसँग सानो गाउँको चर्च, लुथरनको चर्च गएको थिए। जब हामी पुग्दै थियौं, उनीहरूले चर्चको अगाडि शड्डको टुप्पोको लाइनमा उभ्याए र टाउको झुकाएर उभिए, र श्वेतपन्थी पास्टरले हामीलाई स्वागत गर्न ढोकामा कुर्दै बसे, र मेरो अनुयायीलाई भने, "कृपया क्रिश्चियनलाई निको पार्ने व्यक्तिलाई भन कि मेरो उहाँ ती महिलाहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जसले हिजो राती परमेश्वरबारे उनको कुरा सुन्नुभयो र उहाँ आउनुभयो र मलाई भन्नुभएको थियो, र हामी त्यसबेलादेखि ब्यूँझेका छौं, यो महान आशिष्‌को कुरा गर्दा, येशू उनीहरूलाई निको पार्न र सान्त्वना दिन आउनुभएको छ। "
त्यसपछि हामी ड्रेस्डेनमा फर्क्यौं, त्यहाँ निको भएका धेरै मानिसहरू थिए। ड्रेस्डेनमा पहिलो सभा जनवरी, १ 18 8। मा आयोजना गरिएको थियो र सेप्टेम्बरमा हामीले जर्मन भाषामा आइतबार र हप्ता-दिन सेवाहरू सुरु ग .्यौं। जो निको भएका थिए उहाँ नियमित रूपमा आउनुभयो। तिनीहरू मध्ये धेरैले अंग्रेजी जानेका थिए र धर्मशास्त्रको साँचोको साथ पाठ्यपुस्तक, विज्ञान र स्वास्थ्य अध्ययन गर्न शुरू गरे। यस समूहमा एउटी आइमाई पनि थिईन् जसलाई कुष्ठरोग लागेको थियो। अर्का वर्षकी एउटी आइमाई पेटको अल्सर र नास्तिकताबाट निको पारिएको थियो। पछिल्लो चिकित्सा शारीरिक चिकित्सा संग संयोग थियो। एक क्षणमा ईश्वरीय कारणको उनको आजीवन खण्डन बिहानको सूर्यको किरणले रातको छायालाई बिगार्ने जत्तिकै अन्तिम र स्वाभाविकताको साथ हरायो, र यो परिवर्तनको साथ शारीरिक रोग लोप भयो। प्रत्येक सानो समूहले कुनै न कुनै शारीरिक कष्टलाई निको पारेको थियो र तिनीहरूले ईमान्दारको र विज्ञानको ज्ञानको खोजी गरे जुन उनीहरूलाई सिकाइएको थियो जुन ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षामा रहेको थियो।
एक दिन एक जना अमेरिकी महिलाले क्रिश्चियन साइन्सको विषयमा कुरा गर्न बोलाइन्। उनी एक स्वभाविक धार्मिक ईसाईवादको उत्तम प्रकार थिइन। उनले भनिन् कि उनी पादरीहरूको लामो लाइनमा थिइन, कि उनीको नजिकको परिवारमा छ जना प्रचारकहरू थिए। मैले प्रचार गरिरहेको र गरिरहेको कुरा उनले सुनेकी थिइन, र मलाई यो गलत हो र ईसाई समुदायमा सहन नहुने कुरा बताउन आइन्। मैले उनलाई चुपचाप सुनें, र त्यसपछि उनलाई भने कि मसँग मेरो मुक्तिदाता, येशू ख्रीष्टको अधिकार छ र मैले मेरो काम जारी राख्नु पर्छ। त्यसपछि उनी अर्की अमेरिकी महिलासँग गइन् जो एक प्रख्यात क्रिश्चियन र चर्चकी महिला थिइन् र अर्को आइतबार बिहान उनको सेवामा आउन बिन्ती गरे, के भनिएको थियो सुन्न र त्यसपछि मेरो सामना गर्न, मेरो मार्गको त्रुटि देखाउँदै र प्रमाणित गर्दै यो काम जारी राख्न गलत थियो। तिनीहरू आए र सेवाको समापनमा, जसमा क्रिश्चियन साइंस क्वाटरली लेसन पढियो, यी दोस्रो महिला आफ्नो आँखाबाट आँसु लिएर अगाडि आई र यसो भने: “के तिमी मेरो छोरोलाई निको पार्न सक्छौ? के ख्रीष्टले मेरो प्रिय छोरोलाई च ्गाइ दिनुहुन्छ? उहाँ हिपको क्षयरोगबाट पीडित अस्पतालमा हुनुहुन्छ। चिकित्सकहरूले उनको कम्मर कस्नबाट जोगिनको लागि तल झारिदिए, तर उनीहरू भन्छन् कि उहाँ कहिल्यै निको हुन सक्नुहुन्न, र म बचपनदेखि नै एक इसाई हुँ, तर मलाई थाहा छैन कि ख्रीष्ट अझै निको पार्नुहुन्छ। मैले सोचे कि क्रूसीकरणसँगै निको हुन बन्द भयो। ”
उनले मलाई अस्पताल बाट शहरको डाँडाको स्थानमा लैजान्छिन्, यदि म उहाँहरूकहाँ आएँ भने। मैले उनलाई भने कि म खुशीसँग त्यसो गर्नेछु।
केटाले धेरै महिनासम्म खडा गर्न सकेन, र उसको खुट्टा हिपबाट तल प्लास्टरमा थिए। एक जना नर्सले तिनीहरूलाई देश लगे र आमाको अनुरोधमा प्लास्टर कास्ट हटाइन्। उहाँ जानुभएपछि, आमाले पट्टि र वजन उठायो जुन खुट्टा विस्तार गरीयो। म उनीहरूसँग सोमबार दिउँसो सामेल भएँ, र बुधवार उनी बगैंचामा हिडे। प्रत्येक दिन उसले आफ्नो हिड्ने दूरी बढायो।
त्यो हप्ताको शनिबार म आइतवार सेवाहरू सञ्चालन गर्न शहर फर्कें। आइतवार बिहान ती आइमाई जो सेवाहरू भत्काउन हप्ता अघि आएका थिए, फेरि भाग लिइन्, यस पटक उनको छोरासँग, जो सानो बेंसीको सहायताले हिंडे। अर्को हप्ताको दौरानमा उनले कला ग्यालरीहरू र पार्कहरू भ्रमण गरे र यस समयको अन्तमा उनीहरू घरतिर लागे। उनीहरूले मलाई जहाजबाट जहाजमा पठाए किनभने उसको उपचार पूर्ण भइसकेको थियो। “निश्चय पनि मानिसहरुको रीसले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछ" (भजन 76:10).
र यसरी काम चल्यो, मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्तिले बोले र बिहानको घाम जस्तै उज्यालो भयो।
म एक बर्ष अंग्रेज महिलाको घरमा बस्छु। परिस्थिति केही हदसम्म पावलको अनुभवसँग मिल्दोजुल्दो थियो, किनकि उनी इ ्ल्याण्डको महान् परिवारहरूको सदस्य थिइन्, उनकी आमा पोर्टलैंडको ड्यूककी छोरी थिइन्, जबकि उनका बुवा काका एक्चेक्चरका कुलपति थिए।
गर्मीको शुरुमा मलाई नर्वेको समुद्री कप्तानकी श्रीमती भेट्न आएकी थिइन् जसले जवान पादरीलाई उपचारका लागि पठाएका थिए। उहाँ मलाई उनीहरूको जहाजमा पाहुनाको रूपमा अमेरिका लैजान आमन्त्रित गर्न आउनुभएको थियो, उहाँहरूको चिकित्सकले शल्य शल्यक्रिया गर्नुपर्नेछ भन्दै पीडादायी आन्तरिक समस्याको पहिलो अधिकारीलाई निको पार्न। उनले भनिन् कि यो उसको जहाजमा उसको छैठौं वर्ष हो र यसपछिको उसको साब्बेटिकल वर्ष हुनेछ, र उनी र उनको सानो परिवार सँगै घरमा एक बर्ष प्रतिक्षा गरिरहेका थिए; यद्यपि यदि उनी अब अस्पतालमा जानै पर्छ भने उसले यो साब्बेटिकल वर्ष गुमाउने छ र उनलाई शल्यक्रियाको डर धेरै भएकोले उनी आफ्नो ज्यान गुमाउने डर थिए। उनले भनिन् कि उनी र उनको श्रीमान् पनि चाहन्थे कि म उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक बुझ्नको लागि सिकाऊँ र आफ्नो र मानिसजातिको हितको लागि क्रिश्चियन विज्ञान प्रयोग गरूँ।
यो एक व्यापारी जहाज थियो, र न्यूयोर्कमा एउटा कार्गो बोक्नुपर्ने थियो, जहाँ तिनीहरू दुई वा तीन हप्ता सम्म रहनेछन्, र त्यसपछि जर्मनी फर्किनेछन्। यसले मलाई मेरा साथीहरू भेट्न, र मदर चर्चको भ्रमण गर्न, र मेरो काममा छिटो फर्कने समय दिनेछ; र त्यहाँ दुई महिलाहरू थिए जुन सेवाहरू गर्न सक्थे, र त्यहाँ धेरै राम्रो देखिन्थ्यो द मदर चर्चको भ्रमणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, र मेरो शिक्षक जससँग म कामका विभिन्न चरणहरूमा कुरा गर्न चाहन्छु, मैले स्वीकारें आमन्त्रित।
हामी नर्वेबाट फर्किए पछि अक्टोबरको सुरुतिर ह्यामबर्गबाट ​​यात्रा ग .्यौं। यस यात्रामा १ दिन लाग्यो र जब म बिहान सबेरै उठें मैले जहाजलाई एउटा सुन्दर बन्दरगाहमा भेट्टाए तर यो न्यु योर्क भने थिएन। कप्तानले मलाई खबर गरे कि हामीले जर्मनीबाट यात्रा गरिसकेपछि, उनले आफ्नो जहाजको आदेश खोलेका थिए र हामी नोभा स्कोटियाको बन्दरगाह ह्यालिफ्याक्सको लागि बाध्य भएको पाएका छौ, र त्यो अनलोडिंग पछि उनले जहाजलाई दक्षिणी बन्दरगाहमा लैजाने निर्णय गरे। , र धेरै महिना को लागि युरोप मा फर्कने छैन। यात्राको बेला उनले मलाई यसबारे भनेनन, किनकि मलाई फर्कन धेरै ढिलो भइसकेको थियो र यसले मलाई त्रास दिनेछ भनेर उसलाई डर थियो। उनले भने कि मैले जसको पूजा गरेको थिएँ त्यसले परमेश्वरबाट केही राम्रो कुरा ल्याउनेछ। मलाई यसमा कुनै शंका थिएन, र उनीहरूलाई परमेश्वरबारे नयाँ-फेला पारिएको ज्ञानमा खुशी पार्नुभयो, र उनीहरूका अफिसरलाई निको पार्दा रमाए जसले सत्य पनि देखे र आफ्ना प्रियजनहरूलाई घरमा लगे।
यो न्यु योर्क जाने रेलबाट २ घण्टाको यात्रा थियो, जुन म आइतबार बिहान आफ्नो घरको चर्चमा सेवा गर्नका लागि आइपुगें। सेवाको लगत्तै मैले मेरो शिक्षकलाई खोजें र उनलाई भने कि परमेश्वरले मलाई त्यहाँ के लाउनु भएको हो, मलाई थाहा छैन, तर जहाज फर्किएन, त्यसैले उसले मेरो लागि केही गर्नुपर्दछ। जब मैले परिस्थितिहरूको वर्णन गरेको थिएँ, उनले मलाई मलाई श्रीमती एड्डीको कलेजमा जानको लागि ल्याएको कुरा बताइन्।
मेटाफिजिकल कलेज धेरै वर्ष अगाडि बन्द भइसकेको थियो, र मैले सुनें कि श्रीमती एड्डीले यसलाई फेरि खोलेको थियो र यसको कार्यभार लिन शिक्षा बोर्ड नियुक्त गर्‍यो, र केही महिनामा पहिलो कक्षा पढाउनु पर्ने थियो। द मदर चर्चको क्लर्कले मलाई एक आवेदन पठायो, जुन मैले भर्छु र हस्ताक्षर गरें। मैले चाँडै नै शिक्षा बोर्डबाट एक विद्यार्थीको रूपमा स्वीकार गरेको सूचना पाए। म प्राथमिक कक्षामा प्रवेश गर्ने क्रममा मलाई इसाई विज्ञानको थोरै कुरा थाहा थियो, जुन शिक्षणले मलाई गर्नुपर्ने कामको बारेमा स्पष्ट ज्ञान प्रदान गर्दैन। त्यस समयमा मैले केहि दिनहरू पाठ्यपुस्तकको स्वामित्व लिएको थिएँ, र पढेका थिएनु, त्यसैले कक्षामा यसलाई गरिएको अ .्गहरू बुझ्न सकिन। जर्मनीमा मेरो वर्षको बखत मैले पाठ्यपुस्तक धेरै पटक पढेको थिएँ र यसलाई प्रार्थनापूर्वक अध्ययन गरेको थियो, बिभिन्न लेखन पनि, जुन पुस्तकले हामीलाई त्यस वर्षको शिक्षकको रूपमा दिएको थियो; यसैले श्रीमती एड्डी द्वारा निर्देशित कक्षामा पूर्ण शिक्षाको प्रतिज्ञा चमकको धनु थियो र मैले यस आशीर्वादको लागि प्रार्थनापूर्वक तयारीका लागि आफ्नो सबै समय अन्तरक्रियामा समर्पित गरें।
कक्षाको बैठक हुनुभन्दा केही हप्ता अघि क्रिश्चियन साइन्स सेन्टिनेलमा श्रीमती एड्डीले लेखेको एउटा उप-कानून प्रकाशित गरेको थियो जसमा भनिएको थियो कि बर्षदेखि इसाई विज्ञानको अभ्यास नगरेको यस वर्गमा कोही पनि भर्ना हुने छैन। मैले क्रिश्चियन विज्ञानको बारेमा सुनेको दुई बर्ष भयो तर मैले अभ्यास गर्न थालेको एक बर्ष पछि। मेरो शिक्षकले मलाई उनलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि उप-कानूनले मलाई बन्द गर्यो, र मैले शिक्षा बोर्डमा लेख्नु पर्छ र तिनीहरूलाई यो भन्नु पर्छ। मैले जवाफ दिएँ कि म यो गर्न सक्दिन, किनकि उनले मलाई भनिन् कि भगवानले मलाई यस कक्षाको लागि यहाँ ल्याउनुभएको थियो, र यदि यो सत्य हो भने, एक उप-कानूनले पनि मलाई बाहिर राख्न सक्दैन, र यदि यो सत्य नभएको भए केहि पनि गर्न सक्दिन। मलाई यसमा हाल्नुहोस् तर यदि उप-कानूनले मलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने, यो उनीहरूको लागि हो जसले मलाई यो हेर्न र मलाई सूचीत गरे - म ढोका बन्द गर्न सक्दिन। उनी यस कुरामा सहमत भएनन्, तर म यस्तो निर्देशनको लागि पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा भर पर्न बानी पाएको छु कि मलाई कुनै चिन्ता थिएन। मैले शिक्षा बोर्डबाट अरु कुनै शब्द पाइन, र जब समय बोस्टनमा गयो र आफूलाई चर्चमा प्रस्तुत गरें, र कुनै प्रश्न नगरी कक्षामा लगियो।
त्यसपछि मैले कहिल्यै थाहा पाएको सबैभन्दा महिमापूर्ण हप्ताहरू अनुसरण गरें। पहिलो क्षणदेखि नै क्रिश्चियन विज्ञानको विषय व्यवस्थित र स्पष्टसँग खोलियो। यस अवधिको अन्तमा मलाई लाग्यो कि म परमेश्वरको सिंहासनमा उभिएँ र मानिसको भनाइलाई सुन्नुभयो, "यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन् र म उनीसँग प्रसन्न छु”। (मत्ती 3:17). यस शिक्षाले पाएको आशिष्‌ले मेरो समझ खोल्यो र मसँग यो ईश्वरीय आज्ञा भयो कि अरूहरू अघि परमेश्वरको उपहार बोकेर लैजानुहोस्। कुनै पनि शब्दले विश्वको कृतज्ञताको ण व्यक्त गर्न सक्दैन कि त्यो महान प्रेरित, एडवर्ड ए किमबलको प्रेरित शिक्षाको लागि, जसले त्यो वर्ग र अरू धेरैलाई सिकायो। उसले ईश्वरीय प्रेमको सर्वव्यापीता र सर्वशक्तिमानतालाई यत्तिको स्पष्ट बनायो कि उसका विद्यार्थीहरू यसको उपचार र बचाउने शक्ति हेर्न असफल भए।
पछि मलाई थाहा भयो कि जब बोर्डका सदस्यहरूले नयाँ उप-कानूनले मलाई प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो पाए, शिक्षक किमबल, श्रीमती, श्रीमती एड्डीलाई यस लेखमा लेखे, तिनीहरूले मलाई स्वीकार गरे, र उनलाई के गर्नुपर्छ भनेर सोधेर। यसको बारेमा। उनले जवाफ दिइन्: “यस घटनामा एउटा अपवाद बनाउनुहोस् र उनलाई कक्षामा भर्ना गर्नुहोस्। त्यसोभए ऊ खडा होस् वा आफ्नै प्रदर्शनबाट खस्नुहोस्। ” यो मेरो लागि ठूलो मानक हो किनकि यो पछि मेरो लागि एक मानक हो। धेरै चोटि जब कठिनाइ खडा भयो र त्रुटि कस्स भयो कि म परिस्थितिको सामना गर्न सक्दिन, मलाई पर्याप्त थाहा छैन वा पर्याप्त राम्रो छैन, हाम्रो नेताका शब्दहरू मसँग आउँथे, र यो विचार, "म प्रदर्शनबाट यता टाढा उभिएको छु र यो अब असफल हुने छैन। ” त्यसोभए म निडर भएर अगाडि बढ्ने थिएँ।
यस कक्षामा एक सय अठ्ठी जना थिए, 180 जनालाई सिकाउन प्रमाणपत्र दिइयो। मैले एउटा पाउने कुरा सोचेको थिइनँ, बिरामीहरू कसरी निको भए भनेर अझ बढी जान्ने मेरो एकमात्र आशा हो। तर मेरो छक्क पर्दै कि बोर्डले मलाई सिकाउने प्रमाणपत्र प्रदान गर्‍यो र मलाई जर्मन साम्राज्यको राजधानी बर्लिन जान र त्यहाँ क्रिश्चियन साइन्स स्थापना गर्न अनुरोध गर्यो।
कक्षाको काम सकिसकेपछि म फेरि ड्रेस्डेनमा फर्कें, जहाँ मैले गर्मीको अन्तसम्म काम गरिरहें। मैले त्यस शहरमा पाँच जना विद्यार्थीहरूको एउटा कक्षा सिकाएँ, जसमध्ये तीन जना हाम्रो प्रिय कारणमा कामदार भए र तीस वर्षभन्दा बढी समय पछि पनि सक्रिय, सत्यका फलदायी प्रेरितहरू छन्।
1899 को ग्रीष्म तुमा म बर्लिन गएँ र त्यहाँ बस्नको लागि उपयुक्त अपार्टमेन्ट भेट्टाएँ र दुई वर्षको अवधिमा भाँडामा दिए। मालिकलाई बताउनु बुद्धिमानी हो कि भनेर म यो जीवनको उद्देश्य बाहेक अरू कुनै चीजको लागि प्रयोग गर्नेछु, र लीजमा अनुमति छ, मैले उनलाई बाइबल पाठहरू सिकाउने उद्देश्यले सभाहरू गर्ने कुरा बताएँ। उनले इसाई विज्ञानको बारेमा कहिले पनि सुनेका थिएनन्, र यो यसलाई वर्णन गर्ने बुद्धिमानी तरीका देखिन्थ्यो। उनले सोधे कि कति जनाले यी बैठकहरुमा भाग लिने छन्, र म प्रगतिको लागि तयारी गर्न चाहेको थिएँ, मैले उनलाई भनें कि पट्टा समाप्त हुनु अघि त्यहाँ पच्चीस भन्दा बढी हुन सक्छ। यसले मलाई सत्यको शक्तिलाई आकर्षित गर्ने शक्ति कत्ति थोरै थाहा थियो भनेर देखाउँदछ किनकि शुरुका महिनामा सभामा एक सयभन्दा बढी जना भेला भएका थिए। आध्यात्मिक माध्यमबाट बिरामीहरू निको भएमा मानिसहरूलाई टाढा राख्नु असम्भव छ।
एक जना अ ्ग्रेजी महिला, मिस एमी बेन्टिक बिच, ड्रेस्डेनमा मेरो राम्रो होस्टेसकी बहिनी, मसँग बर्लिन आए र त्यहाँ बसोबास गर्न मलाई मद्दत गरे। मानिसहरूलाई काममा लगाउनको लागि मसँग पैसा थिएन, र हामी दुई महिलाहरू आइतबार बिहान लगभग बिहानसम्म काम गयौं, चर्चको कोठामा फर्निचरको व्यवस्था गर्दै, पर्दा झुण्ड्याएर, र बिहानको सेवाको लागि यसलाई साँच्चै सुन्दर बनायौं, र त्यसपछि हामीले अभिनय गर्यौं। पाठकहरू।
अक्टोबर, 1899 मा हामीले पहिलो आइतवार सेवा गरेका थियौं, त्यहाँ मण्डलीमा आठ जना थिए। एक जना जर्मन महिला फ्रुलेन जोहाना ब्रुनो, डेन्भर, कोलोराडोकी क्रिश्चियन विज्ञान विद्यार्थी र तिनकी छोरी, जो संगीतको अध्ययन गरिरहेका थिए। उनले अमेरिकामा मेरी छोरीको माध्यमबाट मेरो बारेमा आइरहेको सुनेकी छिन् र ड्रेस्डेनलाई मलाई कहाँ र कहाँ सेवाहरू सम्पन्न गर्ने भनेर सोध्न पत्र पठाईन्। शिकागोका एक जवान मानिस थिए जो गायनको अध्ययन गरिरहेका थिए, जसको परिवारले उनलाई मेरो ड्रेस्डेन ठेगाना पठाएका थिए, उसलाई मसँग कुराकानी गर्न र सेवाहरू खोल्नको लागि आग्रह गरे। उनले आफूसँग एक वा दुई युवतीहरू लगे जो संगीत विद्यार्थीहरू थिए, र त्यहाँ एक जर्मन अमेरिकी मानिस र उनकी श्रीमती पनि थिए जो डेन्भर महिलासँग घरमा बस्छिन् र उनी आफैले ल्याए।
उपचारको लागि पहिलो कल सोमबार बिहान उद्घाटन सेवा पछि आए। त्यो बिरामी पन्ध्र बर्षदेखि बिरामी परेका एक जर्मन महिला थिइन्। त्यो व्यक्ति जसले मलाई यस केसको बारेमा भन्यो ऊ क्रिश्चियन विज्ञानमा विश्वास गर्ने थिएन, र मलाई पछि भन्यो कि उनी मलाई अप्ठ्यारो पार्ने र ईसाई विज्ञानको कुकर्म प्रमाणित गर्ने आशा राखे कि मलाई त्यस्तो मुद्दा लिन भन्यो। उनी मसँग बिरामीको घरमा आई र मलाई अवस्थाको बारेमा केहि बताई, तर मैले पछि पूर्ण विवरणहरू सुनेन। यो घटना सत्यको शक्तिको यस्तो गौरवशाली प्रदर्शन थियो कि मैले यसलाई पूर्ण रूपमा दिएँ।
उक्त महिला कन्सर्ट गायक भइन् र पहिलो सम्राटकी पत्नी एम्प्रेस अगस्टाको मनपर्ने थिइन्। जब डाक्टरहरूले रूमेटिक गाउट भनिने रोगबाट पीडित हुन थालिन्, उनीसँग एम्प्रेसको आफ्नै चिकित्सकहरू थिए जो सम्भवतः देशको सबैभन्दा उत्तम हो, तर चिकित्सकहरूको प्रयास र उनी र साथीहरूको प्रार्थनाको बाबजुद उनी निरन्तर झन् झन् खराब हुँदै गयो। महारानीले अन्य देशका चिकित्सकहरूलाई बोलाए तर कुनै खास परिणाम भएन र बर्षको अन्तमा उनको अन्य समस्याहरू बाहेक उनी अन्धो भइन्। गाउट हिंसामा वृद्धि भयो, र पीडा यति तीव्र थियो कि चिकित्सकहरूले उनलाई मोर्फीन सहन यो क्षमताको लागि। जब मैले उनलाई पहिलो पटक भेटेँ, उनी धेरै वर्षदेखि मोर्फिनको प्रभावबाट मुक्त थिइनन्, तर उनी लगातार ड्रगि। राखिइन्। यसले अब उनीहरुलाई दुखबाट स्वतन्त्र बनाएन, तर केवल । उनको औषधिप्रतिको लालसा यति ठूलो भइसकेको थियो कि चिकित्सकहरूले उनलाई यो दिनु आवश्यक भएको पाए, दुःखकष्ट यति तीव्र थियो कि यो लालसालाई इन्कार गर्न उनीहरूलाई अमानवीय देखिन्थ्यो।
मलाई पीडा वा औषधिको बारेमा भनिएको थिएन र यो केही हप्ता पछि, जब जर्मन चिन्ने एक साथी मसँग भेट गर्न मसँग गए, बिरामीकी छोरीले उनलाई यी सर्तहरू बताइन्, र भन्यो कि पीडा र पहिलो उपचार द्वारा औषधीको इच्छा निको भएको थियो। अन्धोपन पनि छोटो समयमा मा हरायो, र सबै लाइनहरु मा निरन्तर प्रगति थियो। धेरै बर्षसम्म उनी ओछ्यानमा पट्टि उठाउँदै हिंडिरहेकी थिइन्। चिकित्सकहरूले भने कि उनका सबै जोड्ने ठाउँ छैन र चकले भरिएको छ, त्यसैले यसले शरीरको कुनै पनि भाग सार्न प्रयास गर्ने कष्टदायी पीडा निम्त्यायो। छोटो समय मा यो अवस्था दूर भयो, उनी एक व्हील चेयरमा बसेकी थिइन्, र सजिलै माथि उठाउन सकीन् र केही हप्ता पछि आफैलाई मद्दत गरे। उनलाई एक क्रिश्चियन साइन्स भजन प्रदान गरियो, र उनको छोरी, जो एक सानो अ ्ग्रेजी जान्थिन्, श्रीमती एड्डीको भजनहरू पढ्न सिकाइएको थियो। उनले उनीहरूलाई खेल्छिन्, र हामीले उनीहरूलाई गाउँदै गाउँदछौं र चाँडै आमालाई शब्दहरू र उनीहरूको अर्थको केही सिकाउँदछौं; र हजारौं मोहित आवाज फेरि सुन्न थाल्नुभयो, पहिलो बेहोश र बच्चाहरु जस्तै, तर बिस्तारै शक्ति र मिठास जम्मा, उनको अनुहार खुशी संग ती यी पवित्र गानहरु मा व्यक्त प्रेम मा पिए। हामी तीन जना प्रत्येक चोटि मैले तिनीहरूलाई भेट्न गाउँथे। यो वास्तवमै पवित्र अनुभव थियो।
नयाँ वर्षको दिन यस महिला, फ्रेू बोइस, आफ्नो घर मा ढु ्गा सीढीको दुई उडानहरु मा यात्रा मा धेरै माईल को दूरी मा दगुर्यो, र उनको पहिलो ईसाई विज्ञान सेवामा उपस्थित हुन मेरो घर मा सीढीको दुई उडानहरु मा हिंडे। त्यसको लगत्तै निको पार्ने काम सम्पन्न भयो र उनी आफ्नो कामकुराको लागि व्यस्त भए, क्रिश्चियन विज्ञानको फाइदाजनक शक्तिको जीवित उदाहरण।
यस उपचारले धेरै ध्यान आकर्षण गर्‍यो, र मानिसहरू यसको कारणले टाढा-टाढाबाट आएका थिए। एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता यो हो कि उनीहरूले कहिल्यै उपचारको लागि आएका छैनन् भने; तिनीहरू जहिले पनि उनीहरू भन्छन् कि तिनीहरू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको हो। यस प्रत्याशा र ख्रीष्टमा विश्वासको अवस्थाले निको पार्ने कामलाई सजिलो र प्राकृतिक बनायो।
यस उपचारको खबरको कारण, खोजीहरू शाही अदालत र नम्र जीवनको क्षेत्रबाट आएका थिए, ठूला शहरहरू, साना शहरहरू र गाउँहरू, र समुद्रको टाढाका टापुहरूबाट पनि। एकजना मानिस आएका थिए जो उत्तरी समुद्रीमाको आइल अफ रुजेनमा ड्रगिस्ट थिए, उनी आफ्नो स्टोरको लागि सामान किन्न अर्धवार्षिक यात्रा गरिरहेका थिए। उनले ड्रगिस्टलाई भने जससँग उनी आफ्नी श्रीमतीको व्यवसाय गरिरहेका थिए, जो निराश अमान्य थियो र धेरै वर्षदेखि असहाय थिई, र उसको सानो ल्गडो केटो। औषधी लाग्ने व्यक्तिले उनलाई पहिले नै अद्भुत निको पार्ने घटनाबारे बताइन् र उनलाई निको पारेकी आइमाईको घरमा पठाए जसले मलाई उनको ठेगाना दिए। उनले उनलाई भनिन् कि यो परमेश्वरको काम हो, र उनकी श्रीमती र बच्चा र सबैजना सबै निको हुन सक्छन्।
यस औषधिविद्लाई उनको श्रीमतीले हरेक बिहान र साँझ नब्बे-पहिलो भजन पढ्न लगाएको थियो र यदि सम्भव भएमा तिनीहरूले यसलाई याद राख्नुपर्दछ र यसलाई उनीहरूको निरन्तर साथीको रूपमा राख्नुपर्छ। काम अनुपस्थित गरीएको थियो, र केहि हप्तामा यो खबर आयो कि श्रीमती पूर्ण रूपमा निको भइन् र सानो छोरा स्वतन्त्र छिन्। परिवार आनन्दित थियो, किनकि यो थाहा थियो कि परमेश्वरले उनीहरूलाई निको पार्नुभयो र आफ्नो उपस्थितिको नयाँ प्रकाशबाट तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो।
यस समयमा जर्मनमा ईसाई विज्ञान साहित्यहरू थिएनन्, त्यसैले सत्य कुरा मात्र केही भन्न सकिन्थ्यो, केही सरल बयान दिएर र तिनीहरूलाई मास्टर क्रिश्चियन, ख्रीष्ट येशूका शब्दहरू र कामहरू औंल्याएर। म तिनीहरूसँग कम थोरै मात्र कुरा गर्न सक्छु र बुझें कि केवल भगवानले तिनीहरूको चेतना प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले सधैं बाटोबाट टाढा राख्ने प्रयास गर्नुभयो।
उपचारका लागि आएका धेरैजसो मानिसहरूलाई अ ्ग्रेजी थाहा थिएन, र मेरो भाषाको ज्ञान यति सीमित भएको कारण त्यहाँ व्यक्तिगत सम्पर्क थोरै थियो। त्यो एक्लो दिमागले काम गरेको तथ्यले प्रमाणित भयो कि बिरामी निको भएकाहरू मध्ये धेरैले यो स्वीकार गरे कि यो उनीहरूको च ्गाई गर्ने परमेश्वरकै शक्ति हो, र उही प्रेमले तिनीहरूलाई निको पार्ने धेरै डरहरूलाई नष्ट गर्‍यो जुन उनीहरूको जीवन अँध्यारो हुने देखिन्थ्यो। उनीहरूले पूर्ण विश्वास गरे कि परमेश्वरले एउटा दूत पठाउनु भएको थियो सबै दु: ख हटाउनको लागि र तिनीहरूलाई पिताको रूपमा प्रेम गर्नुभयो।
सेवाहरू आइतबार अ ्ग्रेजीमा र एक हप्ता दिन अमेरिकामा जस्तै घण्टामा आयोजित गरिएको थियो; जर्मन सेवाहरू आइतबार बिहान दश बजेको र शुक्रवार साँझ छ-तीस मा आयोजित थियो। बर्लिनमा मेरो पहिलो जर्मन विद्यार्थी फ्रुलेन जोहाना ब्रुनोले आइतवार पाठ अनुवाद गरे, र उनी र मैले यसलाई पढ्यौं। म हरेक हप्ता उनीसँग धेरै घण्टा अभ्यास गर्थें। निरन्तर प्रार्थना र अ ्ग्रेजी पाठको पवित्र अध्ययन मार्फत, उनको कोचिंग बाहेक, मैले चाँडै नै अनुवाद गरिएको शब्द बुझ्न र यसलाई पढ्न सकें ताकि यो मानिसहरूलाई मात्र चित्तबुझ्दो लागेन, तर निकै निको पार्ने काम पनि बाहिर ल्यायो। यो शुद्ध प्रदर्शन थियो, किनकि मैले जर्मनको अध्ययन कहिल्यै नगरेकोले मलाई इसाई विज्ञानको अध्ययन गर्न र उपचार कार्यमा मेरो सम्पूर्ण समय दिनुपरेको थियो।
हाम्रो जर्मन मध्य-हप्ताका सभाहरूमा, तिनीहरू साना थिए, पचास भन्दा मुनिका, हामीले परिचारकहरूलाई धर्मशास्त्रको साँचोसहितको पाठ्य पुस्तक, विज्ञान र स्वास्थ्यका धेरै प्रतिहरू दियौं; र तिनीहरू आफैं मिलेर समूह बनाउँथे र डेस्कबाट पढ्ने पछ्याउँथे। म अंग्रेजी मा पाठ्यपुस्तक बाट एक अनुच्छेद पढ्ने थियो; त्यसोभए दोस्रो पाठकले जर्मनमा नि: शुल्क अनुवाद पढ्ने थियो; त्यसोभए हामी यसमा फेरि जान्छौं, यस पटक यसलाई अ ्ग्रेजीमा वाक्य द्वारा लिन्छौं, तब जर्मनमा, ताकि तिनीहरू यसलाई परिचित हुन सक्छन्। सत्यको खोजीमा रहेका धेरै जर्मनहरूले थोरै जर्मन-अ ्ग्रेजी शब्दकोशहरू किनेका थिए र उनीहरूसँग पाठ्यपुस्तकको अध्ययन गरे। एक जना मानिस, एक पुस्तककर्ता, जसको व्यापारको समय बिहान सात देखि साँझ नौ बजे सम्म थियो, हरेक बिहान उठ्थ्यो र चार बजेतिर उसको अध्ययन सुरु गर्‍यो। शब्दकोशको सहयोगमा उनले पुस्तक एक बर्षमा पढे। वास्तवमा यो इच्छा थियो जुन प्रार्थना हो, र जसमा यसको आफ्नै उत्तर समावेश छ। यस व्यक्तिले सत्यको साथ शक्ति प्राप्त गर्‍यो र बलिया क्लास लाइनहरूको बाबजुद पनि उनले उनलाई तल राखेका थिए, ऊ आत्माको शक्तिमा खडा भयो र राम्रो कामदार र आफ्ना जनताको लागि सत्यको सन्देशवाहक भयो।
यस समयमा उपचार गर्ने घटनाहरू मध्ये एक पूर्णरूपले अन्धा भएको महिलाको थियो। उनी । बर्षकी उमेरकी थिइन र विश्वास गर्छिन् कि उनी त्यो समयमा पुगेको थियो जब जीवन र आशा पछाडि थिए। जसरी येशू निको पार्नुभयो त्यस आइमाईले पनि उनले “धेरै चिकित्सकहरूको धेरै कष्ट सहनुपरेको थियो” र अन्तमा उनको आँखा निको हुने कुनै सम्भावना नभएको बताइएको थियो किनकि अप्टिक स्नायु शोषनीय थियो। उपचारको यो मामला यति निष्कर्षमा प्रमाणित भयो कि आध्यात्मिक चेतनाको उपस्थितिमा त्रुटि खडा हुन सक्दैन, म यो यहाँ दिन्छु कि पढ्ने जति सबैले सोच्नको अवस्था जान्न सक्छ कि यसले हामीलाई वैज्ञानिक र तत्काल निको पार्न सक्षम पार्छ, जसरी ख्रीष्ट येशू र मरियमले गर्नुभयो। बेकर एडी।
म हरेक दिन धेरै घण्टा यत्तिको व्यस्त रहन्थें कि मैले केहि पुस्तकहरू पढें र आइतबारको पाठहरू अध्ययन गर्ने क्रममा आफूलाई हराउन गाह्रो लाग्यो र अभ्यासको समस्यालाई पन्छाएर चर्च भित्र जान धेरै समय लाग्थ्यो। मेरो विचारलाई स्फूर्ति दिन पहाड, जस्तो गालीलको पहाडमा मास्टरले गर्नुभयो। केही समयपछि मलाई बाँझपनको भावना आयो र आध्यात्मिक भोकले सताएको कुरा सत्यको गहिरो ड्राफ्ट र ईश्वरसँग सचेत मेलमिलापले मात्र शान्त हुन सक्छ।
बिहानको घडीमा बिरामीहरूलाई देखेर मैले एक दिन शान्त समयको लागि व्यवस्था गरें। दिउँसो अघिनै मलाई कसैसँग कुरा गर्न ढोकामा बोलाइएको थियो र त्यहाँ एउटी आइमाई भेट्टाइन् जसले मलाई उनको आमाले उनको आँखाले पीडित भएको कुरा बताइन्, र उनले भनिन् कि यदि उनले मेरी आमालाई मेरो अघि ल्याए भने म उनलाई निको पार्छु। । अर्को दिन उसको आमालाई ल्याउन मैले उनलाई छोटकरीमा भनें।
मध्य दिउँसो सम्म पूरै दिउँसो र साँझ मेरा पुस्तकहरू, बाइबल, विज्ञान र स्वास्थ्य, र विविध लेखहरू सँगै बिताए। मैले पढें र चिन्तन गरे। विचारमा म येशूसँग हिंडें र उहाँको शिक्षा प्राप्त भयो। म श्रीमती एड्डीको शिक्षाको भावनामा केही हदसम्म प्रवेश गरें, र बिहानको बिहान भगवानको उपस्थितिमा सुत्न गएँ, र उही उत्थानदायी विचारका साथ ब्यूँझें।
बिहानको खाजा पछि म भान्सामा गएँ जुन मैले पठाएको फूलहरूको व्यवस्था गर्न सकें। ढोकाको घण्टी बज्यो र नोकर्नी ढोकामा गई। ऊ बरु उत्साहित भयो र मलाई केहि भन्न थाल्यो, तर मैले उनलाई शान्त हुन भनें र मेरो सोचलाई निरन्तरता दिएँ। त्यसपछि मैले बैठकमा कोठामा केही फूलहरू लिएँ। मैले ढोका खोल्दा मैले त्यहाँ दुईजना आइमाईहरू बसिरहेको भेट्टाए जो एक दिन अघि आएकी थिइन, र एउटी सुन्दर सेता कपालका महिला। कान्छोले मलाई भने कि यो उनकी आमा हो र ऊ अन्धा थियो, र आमाले यस भनाइलाई प्रतिविम्व गर्नुभयो।
एक पटकको लागि होईन, सुझावले मेरो विचारलाई प्रवेश गर्यो। तुरुन्तै यस्तो विचार आयो, "होईन, होईन, होईन - भगवानको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा होइन!" आमाले केही समय कुरा गर्नुभयो र म घाममा हेर्दै बसिरहेको थिएँ, ईश्वरीय प्रेमको उपस्थितिमा खुशी थिएँ, र उनी के भनिरहेकी थिइनन् भन्ने कुरामा सचेत थिइनन्। जब उनी रोकी, मैले उनको हात समातेर उनको खुट्टामा सघाए र उनि जान सक्छु भनेर बताएँ। उनले भनिन् कि यदि भगवानले एक पटक उनको छोरीको अनुहार हेर्न दिनुहुन्छ भने, उहाँ मर्न तयार हुनुहुन्छ। मैले जवाफ दिएँ कि परमेश्वरले उनलाई छोरीको अनुहार हेर्न र बाँच्न दिनुहुन्छ। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई बिहानको बिदाई गरें र कोठा छाडिदिएँ, र अर्को बिहान सम्म फेरि सोच्नको लागि मैले आफ्नो अध्ययनमा दिनको काम सुरू गर्न प्रवेश गरे। त्यहाँ मैले आमालाई भेटें र खुशीले चम्किलो भयो; र मैले उनलाई सोधें कि यदि उनकी छोरी अर्को कोठामा कुर्दै थिई, उनले मलाई नाई, उनी एक्लै आइन्, कि उनको दृष्टि पुनर्स्थापित भएको थियो र उनले एउटी सानी केटीले जस्तो देखिन।
म त उनलाई अन्धा थियो भने उसलाई सोधें। सत्यले मेरो चेतना यति भंग गर्यो कि गल्तीको कथन मेरो अघि पुगेको थिएन; र, उनीहरूले मलाई एकदिन अघि भनिएको कथाको बाबजुद पनि, परिस्थिति कस्तो देखिन्थ्यो भनेर म पूर्ण रूपमा अचेत भएँ। उनले आफ्नो विगतका पीडाहरूको बारेमा बताइन् र भनिन् कि जब उनी बिहान सब भन्दा पहिले मेरो घरबाट निस्केकी थिइन, उनकी छोरीले उनलाई सडकको कारमा लगेकी थिइन र उसलाई एउटा सीटमा राखिन् र उनले झ्यालबाट हेरेकी र सडकमा हेरेकी थिइन र रूखहरू र फूलहरू र एक छिनका लागि बिर्सिए कि ऊ अन्धा भएको थियो। उनले आफूले देखेको कुरा बताइन्, तब उनकी छोरी चिच्याई र मानिसहरूलाई भनिन् कि उनकी आमा धेरै वर्षदेखि देख्न सकेकी थिइनन्।
यो सडक कारमा भएका व्यक्तिहरूका लागि यो अत्यन्तै रोमाञ्चक अनुभव भएको हुनुपर्दछ, आमा र छोरी दुबै कुरा गर्दै थिए, उनको विगतको पीडितको बारेमा बताउँदै थिए, र परमेश्वरले उनलाई निको पार्नुभएको थियो। कुनै शव्दले ख्रीष्टको शक्ति प्रदर्शनको उपस्थितिमा मेरो विचारलाई भरिपूर्ण पार्ने विचित्रलाई वर्णन गर्न सक्तैन।
हाम्रो साप्ताहिक साक्षी बैठक भोलिपल्ट साँझ भयो, र त्यो सडक कारमा भएका सबैजनाले यस सेवामा भाग लिए। सीटहरू सबै भरिए र मानिसहरू हल र छेउछाउको कोठामा उभिए। त्यस्तै आत्माले उक्त मण्डलीलाई व्याप्त बनायो जुन शुरुआती प्रेरितहरूको उपचार देख्नेहरूमाझ फेला परेको थियो।
उपचारले चिकित्सकहरूको ध्यान आकर्षण गर्न थाल्यो र पादरीहरूले आफूलाई यो नयाँ अमेरिकी धर्म भनेर चिनाउने मानिसहरूको संख्याले जगायो। एक जर्मन काउन्टेस, जो साम्राज्यलाई भेट्ने महिला थिइन्, मलाई बताउँछिन् कि सम्राटको दरबारमा बलहरू क्रिश्चियन विज्ञान गवाही सभाहरूमा परिणत भएका थिए। जब ती जवान मानिसहरू नाचिरहेका थिए, अदालतका अधिकारीहरू र अध्यक्षहरू उभिए र उनीहरूका साथीहरू र आफन्तहरू माझ च गाई भएको घटनाहरूको बारेमा भने र श्रीमती एड्डीको पाठ्यपुस्तक र येशूजस्तै भइरहेको अचम्मको कामको बारेमा कुरा गरे। गलीलियन समुद्रको किनारमा। जब पादरीहरूको कुरा सुने, यसले तिनीहरूलाई व्याकुल बनायो र उनीहरूले यस आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास गरेकी महारानी जो एक कठोर चर्चकी महिला थिइन्। उनले आफ्नो श्रीमान सम्राटले हस्तक्षेप गर्न खोजे तर उनी त्यसमा कुनै चासो राखेनन् र उनलाई कुनै विश्वास दिलाएनन्।
यसै समयतिर एक शाही अफिसरकी श्रीमती र सासु, जसले शाही दरबारमा धेरै उच्च पद ओगटेका थिए र उनी श्रीमतीका घनिष्ट मित्र थिए, मेरो घरमा हुने सभाहरूमा उपस्थित हुन थाले। यी दुई महिलाहरू जोशिला अध्यात्मवादीहरू थिए, र सेवाहरू पछि व्यक्तिहरूसँग कुरा गरे, उनीहरूलाई उनीहरूले भने कि क्रिश्चियन विज्ञान र अध्यात्मवाद एकै हुन्, र उनीहरूलाई मिलाउनु पर्छ। मैले उनीहरूलाई भने कि यो गल्ती थियो, कि क्रिश्चियन विज्ञान र अध्यात्मवाद दिन र रात जत्तिकै फरक थियो, तर उनीहरूले यो गल्तीलाई हाम्रा जनतामा परिचय गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहे, र अन्ततः म उनीहरूलाई आउन रोक्न अनुरोध गर्न बाध्य भएँ। जब सेवाहरू निजी थियो र मेरो घरमा राखिएको थियो, म यो गर्न सक्दछु। तिनीहरू गहिरो चित्त दुखाए र एकैचोटि शाही दरबारको सीट पोट्सडममा उनीहरूको घरमा बैठक गर्न थाले, अधिकारीहरू र सेनाका अधिकारीहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई उपस्थित हुन आमन्त्रित गरे। यस परिवारबाट आमन्त्रित एक शाही आदेश को लागी समान थियो, मानिसहरूले जान अस्वीकार गर्न सकेन। यी सभाहरूमा काउन्टेसले विज्ञान र स्वास्थ्यबाट पढेका थिए र यसलाई क्रिश्चियन साइंस जर्नलले दिएका केही प्रमाणहरूसहित अनुसरण गरे र त्यसपछि आत्मिकवादी माध्यमले उनीहरूलाई एक ध्यान दिए।
जनता यी सभाहरूमा उपस्थित हुन बाध्य हुनुपर्दा यति रिसाए कि यो एउटा सार्वजनिक घोटाला भयो र यो एउटा अलिखित कानून हो कि कसैले सम्राटलाई कुनै कुराको परिचय दिन नसक्दा उसको अनुरोध नभएसम्म अन्ततः यी बैठकहरूको रिपोर्ट तयार पारियो। उसको सेनाको एक उच्च अधिकारी द्वारा महाराज। वार्तालापको क्रममा उनलाई बर्लिनमा क्रिश्चियन विज्ञान आन्दोलनको कथा भनियो, यो दाबी गरिएको थियो कि मानिसहरूमा धेरै निको पारिएको छ र पादरीहरू डर छ कि राज्य चर्चले यसको धेरै चासो हराइरहेको छ। सदस्यहरू।
सम्राट साह्रै रिसाए र एकैचोटि यी आदेशहरू बन्द गर्न आदेश जारी गरे; कि पुलिसले बर्लिनमा वा साम्राज्यको अन्य ठाउँमा क्रिश्चियन विज्ञान बैठकहरू रोक्नुपर्दछ, पोट्सडेमको बैठकमा भाग लिने माध्यमको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र उनलाई सजाय दिनुपर्दछ र अमेरिकी महिलाको पछि लागेर उनलाई मुक्त गर्नुपर्दछ र यस शिक्षाको अन्त्य गर्नु पर्छ। उनीहरूले त्यो माध्यमलाई जालसाजी फेला पारे र उनलाई बर्ष जेलमा पठाए, र त्यसपछि हाम्रो काम पछि सुरू गरे।
मेरो घरमा राखिएका सेवाहरूमा उपस्थिति यस्तो हदसम्म बढेको थियो कि केही महिना पहिले एउटा हल खोज्नु आवश्यक भएको थियो। हामीले कैसरिन अगस्टा भिक्टोरिया सेल भन्ने सुन्दर भेट्टायौं। यो एक कला स्कूलमा थियो जुन सम्राज्ञीको संरक्षणमा थियो, र निर्देशक काउन्टेस शोएनबर्ग भोन कोट्टा थिए, जो कहिलेकाँही सभाहरूमा उपस्थित हुने गर्थे कि आफूलाई क्रिश्चियन विज्ञान ठीक छ भनेर विश्वस्त पार्न।
सम्राटले हामीलाई विरोध गरिरहेको पहिलो सूचना स्कूलका यस निर्देशकको माध्यमबाट आयो, जसले मलाई सूचित गर्नुभयो कि उनलाई फेरि हामीले सेललाई सेवाहरूको लागि प्रयोग नगर्नू भनेर निर्देशन दिइयो। उनी आफैं मलाई यो बताउन आए कि उनी अत्यन्तै दुखी र लज्जित थिए, तर उनलाई भनिनु पर्छ। हामीले मानिसहरूलाई पहिले नै थाहा दिनको लागि कुनै तरिका थिएन, धेरै नियमित सेवादारहरू त्यस साँझ कुनै सेवा हुनेछैन भनी आएका थिए र न अर्को सूचना नभएसम्म जनतालाई यो भवनको दुबै छेउमा सडकमा उभिएका थिए। तिनीहरूका ठेगानाहरू लिएका थिए ताकि उनीहरूले सूचित गरे जुन हामी पुनः सुरु गरे।
भोलिपल्ट मेरो घरमालिकले मलाई तीन दिनभित्र अपार्टमेन्ट खाली गर्न लेखी सूचना पठाए र मलाई चेतावनी दिए कि यदि मैले त्यसो गरेन भने मेरा सामानहरू सडकमा खडा हुनेछन्। म एकैचोटि अमेरिकी दूतावास गएँ र मैले एक वकिलको नाम लिएँ जसलाई मैले नोटिस लिएँ र मेरो लीज पनि लिएँ। उसले मलाई भन्यो कि मेरो कुनै समस्या छैन, बर्लिनमा भाडा हाकिमहरुका लागि नभई जमिन्दारहरुको लागि हो। मैले तुरुन्तै अर्को अपार्टमेन्ट भाँडामा लिएँ, तर जब फर्नीचरको केही टुक्रा मात्र भित्र पसे, पुलिसले त्यो घरमालिकलाई म अवांछनीय किराएदार हुँ भनेर खबर गर्‍यो, र उसले मलाई भित्र जान अनुमति दिएन। मैले मेरो फर्नीचर भण्डार गर्नुपर्‍यो, र धेरै महिना बस्ने ठाउँ पाउन सकेन।
एक्लै बस्ने मेरो एक साथीले मलाई आएर उहाँसँगै बस्न आमन्त्रित गरे जबसम्म म मेरो आफ्नै घर नपाउँदछु, तर म त्यहाँ तीन दिन मात्र भएको थिएँ जब पुलिसले मलाई भेट्टाए र उनको घरमालिकले उनलाई सूचित गरे कि यदि मैले ढोका पार गरे भने। फेरि, उनको कुरा तीन दिनको सूचना मा सडक मा सेट हुनेछ। म यहाँ र त्यहाँ बस्छु, कहिलेकाँही पाहुनाको रूपमा, र फेरि जहाँ मैले बास पाउनलाई पैसा तिर्न सक्छु, तर एक पटकमा दुई वा तीन रात भन्दा बढी कहिले हुन्न, किनकि पुलिसले मानिसहरूलाई सधै चेतावनी दिएका थिए।
हामी मानिसहरूसँग सम्पर्कमा रहेनौं, र विभिन्न घरहरूमा सानो समूहलाई पाठ पढ्यौं, कहिलेकाँही एक दिनमा दुई वा तीन समूहहरूसँग भेट्ने। यसले प्रत्येक हप्ता जर्मनमा कम्तिमा दश सेवाहरू बनाउँदछ, र अ ्ग्रेजीमा दुई वा तीन। तिनीहरू अवश्य पनि संगीतविना नै थिए, किनकि हामीलाई थाँहा छ कि उनीहरूले ध्यान आकर्शित गर्नु हुँदैन वा उनीहरूलाई पुलिसले निषेध गर्दछ, र तिनीहरू निजी घरहरूमा थिए। केही महिना पछि मैले एउटा भद्र मानिसको स्वामित्वको घरमा एउटा अप्ठ्यारो अपार्टमेन्ट भेट्टाएँ जुन देशमा बसोबास गर्थे र शहरका मामिलाहरू वा प्रहरीहरूमा त्यति त्यति चासो राख्दैनथ्यो। मैले उसलाई अख्तियारवालाहरूको मनोवृत्तिबारे बताएँ तर उनले मलाई आफ्नो अपार्टमेन्टमा राख्न दिए र मलाई धेरै आगन्तुकहरू नआउनू भनेर आग्रह गरे।
यस समयमा मैले बिरामीहरूलाई भेट्ने ठाउँ पाइनँ, र घर-घर गएँ, कोही-कोहीलाई उनीहरूको घरमा र कोही साथीहरूको घरमा। सायद यसका छ महिना पछि मैले १ देखि १ घण्टासम्म काम गरें, त्यहाँ चर्चको लागि एउटा अपार्टमेन्ट भेटियो जहाँ मलाई बिरामीहरू लिने अनुमति थियो र हामीले आफूले चाहे जति सेवाहरू पनि सञ्चालन गरें तर संगीतविना। यसभन्दा पहिले हामीले हल खोज्न कोसिस गरिसकेका थियौं तर हामी जहाँ गए पनि हामीले भेट्टायौं कि पुलिसले हामीलाई चेतावनी दिएका थिए। हामी अब बस्यौं घरको मालिक एक अमेरिकी थिए, र त्यस बेला बर्लिन मा एक अपार्टमेन्ट घर मालिक एक मात्र अमेरिकी थियो। ईश्वरीय प्रेमले मलाई त्यो घर र त्यो राम्रो मान्छेलाई पक्कै पनि अगुवाई गर्‍यो, जसलाई सरकारले हाम्रो सानो ब्यान्डको सतावटको बारेमा थाहा पाएको थियो र सहानुभूतिशील थियो किनकि उसले महसुस गर्यो कि हामीले राम्रो साहस देखाएको छ र हाम्रा परमेश्वर र उहाँको कारणमा पूर्ण विश्वस्तता प्रकट गरेको छ, र किनभने उनी एक अमेरिकी थिए र उनी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्थे।
एक रिडिंग कोठा खोलेपछि र आइतवार सेवाहरू र केही महिनाको लागि साक्षी बैठकहरू पछि, सधैं भजनहरू तिनीहरूलाई गाउनुको सट्टा पठन गरे, हाम्रा केही व्यक्तिहरूले हल पाए। यो इटालियनको स्वामित्वमा रहेको नृत्य स्कूलमा थियो, र बर्लिनको पुरानो जर्जर भूमिमा थियो, तर यो सडकबाट पछाडिको बगैचामा थियो, र यो अरू सार्वजनिक भएको भन्दा ध्यान आकर्षण गर्न कम उपयुक्त थियो। लिने निर्णय गर्नु अघि हामीले मालिकलाई बतायौं कि यदि उसले हामीलाई भाँडामा लिने हो भने उसलाई पुलिसले समस्या गर्न सक्छ। उनले मलाई आश्वासन दिए कि यसले उसलाई रोक्दैन। उनले भने कि उनी एक इटालियन नागरिक थिए र उनले यस भवनको स्वामित्व लिएका थिए र उनी जर्मन पुलिसको कुनै बुद्धिमानी अधीनमा थिएनन न त उनीसित डराउँछन्।
यो एउटा क्रिश्चियन साइन्स चर्चको लागि अनौंठो ठाउँ देखिन्थ्यो, किनकि हामीले एउटा जर्जर आर्चवेबाट जानुभएको थियो जहाँ गाडीहरू स्थिर यार्डमा भण्डार गरिएको थियो, जबकि हलले नै यसको उद्देश्यको फरक चरित्रको साक्षी दियो; तर हामी स्वतन्त्र भएको ठाउँमा पाएकोमा हामी कत्ति कृतज्ञ थियौं र उपस्थित हुन चाहने सबैलाई समायोजन गर्न पर्याप्त मात्रामा यो थियो कि हामी उपस्थित हुनलाई त्यति वास्ता गर्दैनौं - हामी समूहको रूपमा खुशी छौं जस्तो कि हामी शाही च्यापलमा भेट्दै थियौं। अदालत।
भगवानले कामलाई आशिष दिनुभयो। त्यहाँ सभामा धेरै बिरामीहरू थिए, र यो शब्द छिटो छ कि हामी फेरि सेवाहरू लिन लागेका थिए, सत्यको खोजी गर्न उत्साहित र उत्साहित खोजी गर्नेहरू सानो ठाउँ भरिए।
एक आइतबार बिहान दुई प्रहरी अधिकारीहरू उत्तर दिनको लागि लिखित प्रश्नहरूको सूची लिएर सेवामा आए। मैले पत्ता लगाए कि यी प्रश्नहरू एक लेखमा आधारित थिए जुन केही दिन अघि एउटा समाचार पत्रमा आएको थियो। यो एउटा गजबको कथन थियो, जुन यो शुद्ध विज्ञानको पूर्ण झूटा धारणा दिने उद्देश्यले थियो, र यो स्पष्ट भयो कि अधिकारीहरूकहाँ गएर क्रिश्चियन विज्ञान र यसको उपचार गतिविधिहरूको बारेमा सत्य बताउने समय आएको छ र यो सतावट बन्द भयो। मलाई थाहा थियो कि यो परमेश्वरको काम हो, र कुनै मानव कानूनले यसलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। मसँग आउने विद्यार्थी ड्रेस्डेनको ब्यारोनेस ओल्गा फोन बेसचिट्झलाई मैले टेलिग्राफ गरें र मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कन्सुल जनरलबाट परिचय पत्र लिएँ र मलाई अमेरिकी नागरिकको रूपमा परिचय दिएँ र हामी सँगै राष्ट्रपतिसमक्ष गयौं। पुलिसको, जो सम्राटको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए।
हामी को हौं भनेर थाहा नपाएसम्म ऊ एकदमै दयालु थियो र त्यसपछि उसले हामीलाई अत्यन्त घृणित व्यवहार गरे, यद्यपि उनले हाम्रो कुरा सुन्न इन्कार गर्न सकेन। मैले उनलाई त्यहाँ ईसाई विज्ञान के हो भनेर बताउन र हामी कानून-कानून पालना गरिरहेको छौं भनेर सन्तुष्ट पार्न बताएको छु। मैले भने कि यो येशू ख्रीष्टको धर्म हो; मार्टिन लूथरले प्रार्थनाद्वारा बिरामीहरूलाई निको पार्छ भनेर उनलाई सम्झना दिलाए; र उनलाई भन्यो कि मेरी बेकर एड्डीले आध्यात्मिक उपचारको वैज्ञानिक विधि पत्ता लगाउनुभएको थियो, र उहाँका चेलाहरू भएको रूपमा हामी बिरामीहरूलाई निको पार्ने र सुसमाचार प्रचार गर्ने गुरुको आज्ञा पालन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। ब्यारोनेस भोन बेस्विट्जले उनलाई असाध्यै रोग भनेर चिनिने जीवनको पीडाबाट मुक्त हुनको अनुभव बताइन् र हामी धेरै जर्मन मानिसहरूलाई निको पार्दै गरेको ठूलो भलाइको बारेमा बताउछिन्।
जब हामीले हाम्रो स्थितिलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरिसकेका थियौं, मैले उहाँलाई सोधे कि यदि हामी जर्मनीको कानूनको विपरित केही गरिरहेका छौं कि भनेर, र भन्यौं कि यदि हामी हुँदो हो त हामी तुरुन्तै रोकिनेछौं किनकि हामी कानून भन्दा वफादार मानिसहरु भन्दा माथि थियौं। ऊ असाध्यै रिसाएको जस्तो देखिन्थ्यो, र उनले मेरो अनुहारमा हल्लाउँदै एउटा पुस्तक लिए। उनले भने, "यो जर्मनीको अपराधी संहिता हो, र यसमा कुनै प ्क्ति छैन कि कसैलाई पनि आफ्नै तरिकामा परमेश्वरको पूजा गर्न निषेध गरेको छ।"
मैले उनलाई धन्यवाद दिएँ र भनें, "हेर प्रेसडेन्ट, म यो जान्न चाहन्छु, र अब मलाई एउटा कुरा बताउन को लागी अर्को कुरा छ, र त्यो म अपराधी होइन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुँ, र भविष्यमा पनि त्यस्तै व्यवहार हुने आशा मैले राख्ने छु। ” यसले अन्तर्वार्ता बन्द गर्‍यो, र उनले स्वीकार गरे कि त्यहाँ हाम्रो चर्च वा उपचार कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानून थिएन, पुलिसलाई तुरुन्तै बोलाइयो र हामीलाई यस लाइनमा कुनै समस्या भएन।
एउटा महान् पाठ सिकिएको थियो जुन पुलिस राष्ट्रपतिसँगको अनुभवमा थियो। आठ महिनासम्म उनका अफिसरहरूले निर्दयतापूर्वक हाम्रो पीछा गरेका थिए र हाम्रो कामलाई चूर पार्न खोजेका थिए, तर जब म संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुँ र कानूनको अधीनमा छु भनेर खबर पाए, उनले मेरो स्वतन्त्रता स्वीकारे र मलाई डराउने प्रयास गर्न छोडे। सरकारको काम भनेको यसको नागरिकहरूलाई रक्षा गर्नु हो, र उनीहरू आफ्नो नागरिकताप्रति वफादार रहन्छन् भने तिनीहरू असफल हुन सक्दैनन्। श्रीमती एड्डीले विविध लेखहरू (पृष्ठ १) 185) मा लेख्छिन्, "उनको सन्तानको रूपमा आत्मिक पहिचानको मान्यता र उपलब्धि, विज्ञान नै स्वर्गको बाढी ढोका खोल्छ।" परमेश्वरसँग मानिसको छोराको मान्यता र यस सम्बन्धको मान्यता भनेको पुत्रपिताको उपलब्धि हो, किनकि बुबा सधैंभरि मानिससँग एक हुनुहुन्छ। अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिकामा मेरो नागरिकता पाउनु भनेको सरकार र यसका कानूनहरूको संरक्षण हो। कुनै व्यक्तिगत याचना या हस्तक्षेप आवश्यक थिएन, किनकि कानून सधैं लागू हुन्छ।
हामी भगवानको सरकारका नागरिक हौं, र यदि हामी यो स्वीकार्छौं र अन्य कुनै पनि शक्तिको सल्लाह स्वीकार्न अस्वीकार गर्छौं भने, हामी सधैंभरि ईश्वरीय कानूनको संरक्षणमा सुरक्षित रहनेछौं, यो कानून जसले ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रण गर्छ र कुनै विपक्षी शक्तिलाई थाहा छैन। परमेश्वरसँगको साँचो सम्बन्ध र ईश्वरीय प्रेमको संसारमा आफ्नो नागरिकता स्वीकारेको अनुपातमा एक मसीही वैज्ञानिक सबै त्रुटिहरूको सबै आक्रमणबाट छुटकारा पाउँछन्।
सतावटको यी महिनाहरूमा हरेक मामला निको भयो।
काम यस समयमा ड्रेस्डेनमा स्थिर रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, र फेब्रुअरी, 1900 मा, सेवाहरूको लागि प्रयोग गरिएको कोठा एकदम सानो देखियो, र कामदारहरूले एउटा अपार्टमेन्ट सुरक्षित गरे जुन व्यापार उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, र थियो भित्ताहरू बाहिर लगियो, तिनीहरूलाई धेरै ठूलो ठूलो कोठा दिएर र क्लर्कको कार्यालय र पुस्तकहरू बिक्रीमा राख्नको लागि दुई साना कोठा छोडे। उनीहरू पढ्ने कोठाको लागि चर्च कोठा पनि प्रयोग गर्थे। तिनीहरूले यी नयाँ क्वार्टरहरूमा फेब्रुअरी 17, 1900 मा पहिलो सेवा लिए, र भोलिपल्ट जर्मनीको फ्रान्स क्राइष्ट, साइन्टिस्ट, ड्रेस्डेन, जर्मनीको औपचारिक रूपमा भेला भए।
ड्रेस्डेनका विद्यार्थीहरूले मलाई यस अवसरमा उनीहरूसँगै आमन्त्रित गरे र मैले यो सुअवसरको आनन्द पाएँ। बर्लिनमा काममा चासो लिनेहरू मध्ये धेरैले पनि यस खुशीको अवसरमा उपस्थित हुन चाहेका थिए, त्यसैले बर्लिनका हामीमध्ये १ जना जर्मनीको प्रथम क्रिश्चियन विज्ञान संगठनको उद्घाटन सेवामा आएका थियौं। यो ऐतिहासिक अवसर थियो, र हामीसँग त्यो सेवामा भाग लिने सुअवसर थियो र चर्चको आयोजना हुँदा बैठकमा उपस्थित हुँदा हामीले महसुस गर्यौं कि जर्मन देशको स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्रताको लागि पहिलो कदम हो जुन सीमित हुनेछ। धार्मिक स्वतन्त्रता।
मैले लेखेको रूपमा तीस बर्ष पछि जर्मनी एउटा गणतन्त्र हो र धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको देशको कानून हो।
अक्टोबर 20, 1900 मा मैले बर्लिनमा काम सुरु गरेको ठीक एक वर्ष पछि हामीले जर्मनीको कानून अन्तर्गत जर्मनीको बर्लिनस्थित क्रिस्टियन, चर्च अफ फर्स्ट चर्चको आयोजन ग .्यौं। पुलिस विभागले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो शिष्टाचारको साथ व्यवहार गर्‍यो। तिनीहरूले फाईलमा राख्नको लागि हाम्रा नियमहरू, पंथ, आदिको प्रतिलिपि मागे। मैले उनीहरूलाई छापिएको पर्चाहरूमध्ये एक जनालाई द मदर चर्चको टेनेट्स सहित पठाएँ जुन यो चर्चको एउटा शाखा हो भनेर उल्लेख गर्दै हाम्रा टेनेन्टहरूले साम्राज्यको आधिकारिक रेकर्डको एउटा अंश बनाए। हामीले एघार जनाको साथ आरम्भ गरेका थियौं, र अर्को जूनमा हाम्रो अर्धवार्षिक कम्युनियन सेवामा हामीले एघारजनालाई थप्यौं, जसमा कुल बाईस जना थिए। हामीसँग हप्तामा चार सेवाहरू थिए, दुई जर्मन र दुई अंग्रेजी, र आइतवार स्कूल। हाम्रो अंग्रेजी मण्डलीको औसत झण्डै पचास; जर्मन मण्डलीको आइतवारको औसत , र एक सय पच्चीसदेखि एक सय पचास हप्ताका सभाहरूमा। हामीसँग एउटा आइतवार स्कूल थियो जुन आठ बच्चाहरूबाट शुरू भयो जुन अहिले सयौंमा बढेको छ। कामको हरेक विभाग सक्रिय र रमाईलो थियो।
जर्मनहरूले आधिकारिक चर्चबाट छुटकारा पाउन गाह्रो थियो, त्यसैले तिनीहरूको प्रदर्शन त्यति सरल थिएन जस्तो चर्च र राज्य पृथक भएको देशहरूमा बस्ने र धार्मिक स्वतन्त्रताको तथ्य हो। एक जर्मन जसले राज्य चर्चबाट पछि हटे उनी कानून बमोजिम कानुनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन्। यसको बाबजुद र भाषाको कठिनाइको बाबजुद पनि हामीले पहिलो वर्षमा राम्रो स ्ख्यामा पुस्तकहरू बिक्री गर्यौं: विज्ञान र स्वास्थ्यका एक सय पाँचवटा प्रतिलिपिहरू बाइबलको कुञ्जीसँग (उनीहरूको दुई तिहाइ पकेट संस्करण), विविध लेखन, र सबै अनुपातमा हाम्रो नेता, मेरी बेकर एड्डी द्वारा अन्य पुस्तकहरू।
अभ्यास बढ्दै जाँदा, खोजी गर्नेहरूको संख्या बढ्यो र उनीहरूलाई पुस्तक पढ्न सिकाउने विस्तृत विधि प्रयोग गर्नुपर्‍यो। जर्मनहरू साना समूहमा विभाजित थिए। क्रिश्चियन साइंसका विद्यार्थीहरू जसले प्रत्येक अंग्रेजी बोल्थे उनीहरूको समूहको जिम्मेवार थियो, उनीहरूसँग हप्तामा एक वा दुई पटक भेट्ने गर्थ्यो र उनीहरूलाई कोचिंग गर्दा हामीले सुरुमा सभाहरूमा प्रयोग गर्थ्यौं।
यस क्षेत्रको कामको लागि प्रेम र अभिषेक आवश्यक थियो जसले आफ्नो भाषामा क्रिश्चियन विज्ञान फेला पारे र भेट्न यी कुनै पनि कठिनाइहरू भएनन्। त्यहाँ निकै निको पार्ने काम भइरहेको थियो, र प्रत्येकले सत्यको अन्न प्राप्त गरेको यस गतिविधिमा दबिएको थियो।
म विद्यार्थीहरूलाई केसहरू निको पार्न दिनेछु, र तिनीहरू मसँग कुनै प्रश्न वा कठिनाईको साथ आउनेछन्; र उनीहरूको समझ बढ्दै गएपछि नयाँ कामदारहरू उनीहरूको गतिविधिमा मार्गदर्शनको लागि फर्किए। माग मजदुरहरूको स ्ख्या भन्दा धेरै छिटो बढेको जस्तो देखिन्थ्यो, र प्रत्येकले परमेश्वरको सेवामा सक्रिय भाग लिन आवश्यक थियो।
सबैलाई निर्देशन दिइयो कि क्रिष्ट येशू र श्रीमती एड्डीले उत्पन्न हुन सक्ने हरेक प्रश्नको जवाफ दिएका थिए, र यदि उनीहरू प्रार्थनापूर्वक प्रार्थना गर्दछन् भने, सबै समस्या समाधान हुनेछ; कि उनीहरूलाई जहिले पनि थाहा हुनुपर्दछ कि येशू ख्रीष्टमा उनीहरूको दिमाग थियो र महान् चिकित्सक थिए। कि डर वा आत्म-चेतना को कुनै तर्क आफ्नो गतिविधि र यसको लाभदायक परिणामहरु लाई बाधा गर्न सक्दैन। सबै जना यत्तिको विश्वस्त थिए कि परमेश्वरले हामीलाई यो काम गर्न नियुक्त गर्नुभएको थियो र हामीसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही डराउँदैनथे।
युवा कामदारहरूले सरल केसहरू लिए र धेरै उपचार गरे, जबकि अधिक गाह्रो केसहरू ममा छोडियो। म पनि एक जवान कामदार थिएँ किनकि मलाई क्रिश्चियन साइन्स यस अवधिमा तीन वा चार बर्ष मात्र थाहा थियो, त्यसैले ख्रीष्टले त्यो काम गर्नुभयो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। मानव श्रमिकहरू मात्र प्रेम र आज्ञाकारिता संग सुसज्जित थिए। समय बित्दै जाँदा र प्रारम्भिक विद्यार्थीहरूले अनुभव प्राप्त गरे, तिनीहरू पनि भनिन् घातक घातक घटनाहरू, जस्तै क्षयरोग, क्यान्सर, अन्धा, आदि, र सबै निको भए। त्यहाँ कुनै असफलताहरू थिएनन्।
उपचार कार्यको अतिरिक्त त्यहाँ अनुपस्थित बिरामीहरूलाई धेरै चिठीहरू लेख्नुपर्ने थियो, र तिनीहरूको कुनै पुस्तक नभएको कारण उनीहरूले सिकेका सबै विज्ञान अनुवादित शब्दमा लेख्नुपर्थ्यो। म एकै घडी भन्दा पहिले विरलै सुत्थें, र उदाउँदो सूर्यको लागि मलाई मेरो डेस्कमा अझै भेट्टाउनु कुनै विरलै कुरा थिएन।
यस समयमा ड्रेस्डेनमा काम बढ्यो र कडा भयो। ड्रेस्डेन पुलिसले बर्लिनमा यस्तै स्थिति लिए। तिनीहरू सेवाहरूमा उपस्थित भए र कामदारहरूलाई हेरे, तर उनीहरूमा सम्राट नभएको कारण तिनीहरू क्रियाकलापहरूमा यति जोडदार थिएनन् र चर्च सेवाहरू नियमित तवरले सञ्चालन हुन्थ्यो। निको भएका धेरै केसहरूले चर्चमा धेरै मानिसहरूलाई ल्याए, र उपचारको लागि अधिक खोजी गर्नेहरू। बर्लिनमा सिकाइएको प्रत्येक कक्षामा ड्रेस्डेनका धेरै विद्यार्थीहरू थिए। म प्राय: त्यस क्षेत्रका कामदारहरूलाई भेट्न जान्छु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको सहयोग र प्रोत्साहन दिन। म बिहान मेरा बिरामीहरूलाई घरमा देख्छु, एक बजेको रेलगाडी लिएर ड्रेस्डेन चार-बीस बजे पुग्थें, त्यहाँ मेरा बिरामीहरू र विद्यार्थीहरूलाई भेट्न, र सात बजे फर्केर, साँझको दस बजे मेरो घर पुग्दा, मेरो अनुपस्थित काम लिनुहोस्, रातमा सम्म यसलाई जारी राख्नुहोस्।
यस अवधिमा मदर चर्च म्यानुअलले वार्षिक तीन कक्षाको लागि प्रबन्ध गर्‍यो, र तिनीहरू अत्यन्त सानो थिए भने, सुरुमा केवल चार वा पाँच विद्यार्थीहरू, तिनीहरूले कामदारहरू तयार गर्नमा ठूलो मद्दत गरे। शिक्षण धेरै सरल थियो र विद्यार्थीहरूलाई कक्षा भन्दा धेरै पहिले ० वर्ष पछि ल्याइएको थियो।
हरेक महिना एसोसियसनका बैठकहरू हुने हुँदा शिक्षकले विद्यार्थीहरूसँग नजिकबाट सम्पर्क राख्‍न र गलतफहमीहरूदेखि होसियारीसाथ जोगिन सक्षम भए। हामीले सँगै मिलेर काम गरेका र बुझ्ने क्रममा बढेका छौं, सधैं हाम्रो प्यारी आमा र नेता, मेरी बेकर एड्डी, भगवानको सन्देशवाहकको शिक्षा र उदाहरणबाट निर्देशित र प्रोत्साहित।
कामदार व्यक्तिको फाइदाको लागि बीमा ऐनको कारणले, ज्याला लिने सबैजना, चाहे त्यो फर्श सफा गर्ने महिला हो, जुत्ता फेर्ने पुरुष, इम्पीरियल बैंकका अध्यक्ष वा सरकारका एक अधिकारी, बाध्य थिए एक चिकित्सक द्वारा जाँच यदि ऊ राम्रो छैन भने, र आफ्नो काम छोड्नु भन्दा पहिले एक डाक्टरको प्रमाणपत्र छ; र उसले फेरि जाँच गर्नु पर्छ र उपचारको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु अघि उसले आफ्नो गतिविधिहरू पुनः सुरु गर्नु अघि।
यी सर्तहरूमा काम सुरु गर्दा, हामीलाई चिकित्सकहरू वा तिनीहरूको पूर्वानुमानको डरको कुनै मतलब थिएन। उनीहरूले बारम्बार घोषणा गरे कि त्यो मुद्दा घातक हुन्छ, तर हामी यो तुरुन्तै रिकभ भएको देख्नेछौं जब परमेश्वरको कानून लागू भएको थियो; यसैले हामी चिकित्सा चिन्ताको माध्यमबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुनै पनि डरबाट उम्क्यौं।
हाम्रा प्रिय व्यक्तिहरू यस कठिन समयमा साहसी र विश्वासी थिए। सतावटको समयमा हामीले सेवामा भाग लिइरहेका दर्जनौं भन्दा बढीलाई हराएनौं र कुनै विद्यार्थीले विश्वास गुमाएनन्। यो धेरै लामो समय सम्म चलिरहेको थियो; उक्त कागजमा बारम्बार मेरो बारेमा लेखहरू लेखिएको थियो जसमा कि मलाई केवल एक जना अमेरिकी ठग रहेछ भनेर घोषणा गर्दै जर्मन जनतालाई झुक्याउन खोज्दै थिए।
सतावटको यस समयमा, जब कोही बिरामीलाई आफ्नो ओछ्यानमा मात्र सीमित राखियो, जासूसहरू कसैलाई मार्न सकिन्छ भन्ने आशामा उक्त केसलाई घरमै राखिएको थियो र म पक्रिनेछु र फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनेछ तर हरेक बिरामीलाई। यी आठ महिनाको अवधिमा च ्गाई गरिएको थियो।
एउटा घटनामा एउटी महिलालाई उनको केवल आशा शल्यक्रियाको शल्यक्रिया हो भनेर बताइएको थियो, जस बिना उनी चौबीस घण्टा बाँच्न सक्दिनन्। उनलाई निको पार्ने थुप्रै घटनाहरू थाहा थियो र उनले मेरो पतिलाई मेरो निम्ति पठाइन् र घोषणा गरिन् कि उनीसँग ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै चिकित्सक हुनेछैन, र मैले यो वचन ल्याउनुपर्दछ र उनलाई निको पार्नु पर्छ। डरले उग्र भएर उसले चिकित्सकलाई उनलाई शल्यक्रिया नगर्ने भन्यो र मैले उनलाई क्रिश्चियन विज्ञानमा निको पार्ने प्रयास गरें।
डाक्टरले एकैचोटि पुलिसलाई खबर गर्‍यो, र अन्त नहुन्जेल उनीहरूले एउटा जासूसलाई घरमा पठाउन पठाए। उनी केही दिन भित्रै निको भए, र जासूस जसले केस हेरेका थिए ती अधिकारीहरु आधिकारिक निगरानी फिर्ता पाउने बित्तिकै सेवाहरुमा आए।
पुलिसको हस्तक्षेप समाप्त भएपछि एक बर्षभित्रै धेरै जासूस सेनाहरू क्रिश्चियन विज्ञानका अति व्यर्थ विद्यार्थी भए र उनीहरूका पत्नीहरू र परिवारहरूले सेवाहरूमा भाग लिए।
यी घटनाहरूको घडीमा जर्मनीको कानुन थियो जसले कुनै पनि विदेशीलाई कुनै पनि कारण नबनाई तीन दिनको सूचनामा देश बाहिर पठाउन सक्दछ। यदि व्यक्तिले पठाइएको कारणको बारेमा जान्न इच्छा गरेमा, उसले यो उनको सरकार द्वारा गरिएको अनुसन्धानबाट मात्र सिक्न सक्दछ। धेरै व्यक्तिहरू जसलाई यो थाहा थियो उनीहरू छक्क परे कि तिनीहरूले यो कानूनबाट म आफैंलाई मुक्त गर्न सकेनन। यसको पछाडि एउटा मात्र कारण हुन सक्छ: अर्थात् परमेश्वरले मलाई त्यहाँ पठाउनुभएको थियो र मलाई सँभाल्नुभयो र मैले मलाई गरेको काम पूरा नगरुन्जेल मलाई त्यहाँ रोक्नुभयो।
यो अनुभवले हामीलाई अमूल्य पाठ ल्यायो। हामीले हर समय परमेश्वरमा भर पर्न सिक्यौं, किनकि उहाँले आफ्नो उपस्थिति प्रकट गरिसक्नुभएको थियो, र हामीले मानव इच्छाको आधारमा झूटा सोच र सरकारको शक्तिहीनता प्रदर्शन गरेका थियौं।
हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रदर्शन बाहिर आइसकेपछि र नयाँ चर्च कोठामा सेवाहरू दृढतापूर्वक स्थापित भएपछि मलाई लाग्यो कि मदर चर्चको भ्रमण गर्ने र त्यहाँ भएका प्रियजनहरूलाई केही राम्रो कुरा दिने समय आयो। हामीलाई, र उनीहरूको पुरस्कारको साझा। म बोस्टन गएँ, र अमेरिकाका सबै ठाउँ र इ ्ग्ल्याण्ड र स्कटल्याण्डका हजारौं आनन्दित क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरूसँग मिसिएँ र उनीहरूसँग दि मदर चर्चका उत्कृष्ट सेवाहरूको आनन्द उठाए। त्यहाँ मैले 1902 को लागि हाम्रा प्यारो नेताको सन्देश सुनें: “प्रिय भाइहरू, सतावटको समयमा परमेश्वर आफ्ना जनहरूका लागि मायालु प्रबन्धको अर्को वर्षले क्रिश्चियन विज्ञानको इतिहासलाई चिह्न लगाएको छ....
खराबी, भयंकर षडयन्त्रको साथ मिलेर भए पनि परमेश्वरको महिमा गर्नलाई बनाइएको हो। ”
यो हाम्रा प्रिय नेताको मुटुको सीधा सन्देश देखिन्थ्यो, र म सन्तुष्ट थिएँ तर मेरो लागि ठूलो आशिष थियो।
जब केही दिन पछि म कन्कर्ड गएँ, कसैले श्रीमती एड्डीलाई खबर गरे कि म शहरमा छु। भोलिपल्ट उनी मलाई भेट्न आई। म वास्तवमै अति नै व्याकुल भएको थिए किनभने मलाई थाहा थियो कि उनले धेरै बर्षहरूमा व्यक्तिगत भेट गर्नुभएन।
उनले मलाई बताइन् कि उनी अत्यन्त महत्वपूर्ण काममा व्यस्त छिन्, मदर चर्चको सरकारको समापन, र उनले यस गर्मीमा कुनै पाहुनालाई नभेटेको कुरा घोषणा गर्नु आवश्यक भएको छ, त्यसैले उनी मलाई बोलाउँदिनन्। घर तर मसँग आउनु पर्छ। मैले उनलाई किन मेरो सम्मान गर्ने भनेर सोधें, उनले जवाफ दिइन्, "म तपाईंलाई आफ्नो प्यारो हातहरू लिइन, र तिम्रो बहादुर आँखामा हेरेर, र धन्यवाद 'भन्दै तपाईंलाई छोड्न दिन सक्दिन।” जब मैले भने, “ धन्यबाद, आमा। के को लागि?" उनले जवाफ दिइन्, "साहसी र सत्य भएकोमा, साहसी भई गल्तीको सामना गर्नुपर्दा र सत्यको साथ खडा भएकोमा।" मलाई थाहा थिएन कि उनी जर्मनीमा केही परिस्थितिहरू जान्दछिन्, तर उनले भनिन्, "मलाई थाहा छ मेरा बच्चाहरूले के गर्दैछन्, र सत्यको प्रगति र विजयको बारेमा।" उनले हाम्रो जीतमा उनको खुशीको कुरा गरे; उनले भनिन् कि प्रारम्भिक इसाईहरूको समयदेखि यता सतावट जस्तो कहिलै पनि भएको थिएन, र यस्तो विश्वासयोग्यतालाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ र साहस र वफादारीको प्रदर्शनले आउँदो वर्षहरूमा अरु धेरैलाई बल प्रदान गर्ने छ।
जब मैले उनलाई विनम्र कोठाको बारेमा भनें जहाँ हामी हाम्रा सेवाहरू राखीरहेका थियौं र हाम्रा एक जना परिचारकले भने कि कोठाको प्रवेशद्वारले उनलाई गुफामा प्रवेश गरेको कुरा सम्झना गरायो जहाँ प्रारम्भिक मसीहीहरूले उनीहरूको सेवा गरेका थिए, उनले जवाफ दिइन् सम्पूर्ण अनुभवले उनलाई ती प्रारम्भिक इसाईहरूको सम्झना गरायो, र उनले मसँग उभिएका मजदुरहरूलाई उनको मायालु अभिवादन पठाइन्।
हाम्रो कामको यो मायालु मान्यता र यसमा कोमलताले मलाई आफ्नो जर्मन घर र फिल्डमा खुशीको बखत पठाइयो। मैले वास्तवमा इस्राएलमा एउटी आमा भेट्टाएको थिएँ जसले आफ्ना बाल-बच्चाहरूको पीडा जान्दछन्, उनीहरूमाथि र उनीहरूको साथ हेरचाह गर्छिन् र उनको आशिष्‌द्वारा पुरस्कृत गर्छिन्। त्यस समयदेखि उनले काम र मजदुरहरूप्रति आफ्नो रुचि व्यक्त गरिन, र हामीलाई बारम्बार सन्देशहरू पठाई जसले हामीलाई बलियो र प्रोत्साहित गर्‍यो।
उपचार कार्यको लागि माग बढ्दो छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ कामदारहरू बाहिर ल्याए र सबै आध्यात्मिक समझ र अभिभारामा बढे।
कक्षाहरू ठूलो थिए, विद्यार्थीहरू युरोपका सबै ठाउँहरूबाट आएका थिए, जहाँ उपचारको नाम चलेको थियो; स्विजरल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, र रूस बाट; र यी विद्यार्थीहरूले सत्यलाई आफ्नो घर पुर्‍याए, त्यहाँ प्रदर्शन गरेर।
मैले केवल अंग्रेजी जानेका मानिसहरूलाई मात्र शास्त्र र स्वास्थ्यको लागि धर्मशास्त्रको कुञ्जी, र श्रीमती एड्डीको अन्य पुस्तकहरू पढ्न सिकाउँथे; तर कोही अ ्ग्रेजी पढ्न र बोल्ने शब्द बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले यो दुबै भाषाहरूमा पाठ दिन आवश्यक थियो। मैले प्रशस्त नोटहरू बनाएँ र अ ्ग्रेजीमा पाठ दिएँ, त्यसपछि भाषा जान्ने मानिसहरूलाई छोड्ने अनुमति दियो, र जर्मनमा दोहोर्याइएको विद्यार्थीहरूको लागि जो बोल्ने शब्दसँग परिचित थिएनन्।
सुरुमा मैले पहिलेका विद्यार्थीहरूमध्ये एकलाई मसँग रहनुपर्‍यो र मलाई यस शिक्षामा मद्दत गर्‍यो, तर मैले बिस्तारै यो एक्लै गर्न सिकें।
धेरै खुशी, सक्रिय बर्षहरू यस बित्यो। विद्यार्थीहरूले विभिन्न शहरहरूमा चर्चहरू शुरू गरेका थिए। फेरि "ज्ञानी पुरुषहरू" ले तारालाई देख्यो जुन ख्रीष्टको आगमनको घोषणा गर्‍यो।
१ 190 ०। मा श्रीमती एडीले हामीलाई जर्मन हेराल्ड दिईन्, जुन मासिक प्रकाशन थियो जुन अंग्रेजी क्रिश्चियन साइंस जर्नलबाट अनुवाद गरिएको थियो। यो ठूलो सहयोग थियो। यसले आफ्ना पाठकहरूलाई क्रिश्चियन विज्ञानमा उत्कृष्ट लेखहरू प्रदान गर्‍यो र चिकित्साको प्रशस्त प्रमाणहरू दियो। यो केवल अधिकृत जर्मन साहित्य थियो। यसभन्दा अघि हामीले एउटा व्याख्यानमा अनुवाद गरेका थियौं, र एउटा सानो पर्चा, प्रश्नहरूको उत्तर, एडवर्ड ए किमबलले, प्रकाशन समाजले यसको अनुमति दिएका थिए।
सन्‌ 1906 को अन्तमा मलाई लाग्यो कि मेरो काम सकियो। म इसाई विज्ञानको परिचय दिन जर्मनी गएको थिएँ, र यो अब प्रख्यात र दृढतापूर्वक स्थापित भएको थियो। कामदारहरूको प्रयास गरियो र सत्य थियो; तिनीहरू विश्वासयोग्य र ज्ञानी थिए। तिनीहरू आफ्नो मातृभूमि मा हाम्रो प्रिय कारण को कार्य अगाडि बढाउन तयार थिए। यसैले मैले उनीहरूसँग छोडिदिएँ र अमेरिका फर्कें। मेरो जन्मभूमि, क्रिश्चियन साइन्सको जन्मस्थल र यसका उद्घोषकको घर रहेको ठाउँमा मेरो उपचार र शिक्षणको कामलाई निरन्तरता दिन अमेरिका फर्कें।
विद्यार्थीहरू उनीहरूको विश्वासमा वफादार थिए, र काम स्थिर रूपमा अघि बढेको छ। एक बर्लिन क्षेत्रबाट नियुक्त इसाई विज्ञानका प्रथम जर्मन शिक्षक थिए। सन्‌ 1912 मा उनीहरूको विश्वासी सेवाको लागि जर्मन भाषामा विज्ञान र स्वास्थ्यसहितको पुस्तक साथसाथै किताबको प्रकाशनले इनाम दियो। यसले कामलाई ठूलो प्रोत्साहन दियो।
क्रिश्चियन साइन्स र यसका लाभकारी कामहरू अब शहरहरू, साना गाउँहरू र हिमाली भेगाहरूमा जर्मनीभरि जानिन्छ। र जहिले पनि क्रिष्ट हिलिंगको चिनारी भएको ठाउँमा, मरियम बेकर एड्डीको नाम सिक्नेहरू र साधारण किसानहरूले माया र सम्मान गर्छन्। उनको स्थान यस युगमा ईश्वरको प्रकटकर्ताको रूपमा, र क्रिश्चियन विज्ञान आन्दोलनको नेताको रूपमा स्वीकार गरियो।
रायोको दानाको उखानमा मास्टरले भने: “जब यो पृथ्वीमा रोप्दछ (यो) पृथ्वीमा भएका सबै बीउहरू भन्दा कम हुन्छ। तर जब यो बीऊ छर्छ, यो उम्रदै उम्रन्छ, र सबै जडिबुटीहरू भन्दा ठूलो हुन्छ र बढेर ठूलो हाँगा उम्रन्छ। ताकि हावाका चराचुरू ्गीहरू यसको छहारीमा बस्न सक्छन्। उनले यसलाई परमेश्वरको राज्यसित तुलना गरे।
मलाई यो दृष्टान्त सधैं याद आउँछ जब म महान क्रिश्चियन विज्ञान कार्यको बारेमा सोच्दछु, जसको शाखाहरू सबै मध्य यूरोपभरि फैलन्छन्। रायोको दाना यति ठूलो रूखमा हुर्केको प्रेमको सोच थियो जसले १6मा विश्वको यात्रा गर्ने महिलालाई क्रिश्चियन साइंस पाठ्यपुस्तक प्रदान गर्न प्रेरित गर्‍यो। यसले जरा गयो र सत्यको चेतनामा सत्यलाई प्रेम जगायो। कि पुस्तक को प्राप्तकर्ता। बदलामा उनले यी प्यारा व्यक्तिहरूकहाँ गएर उनीहरूलाई सत्य दिनको लागि स्वतन्त्र व्यक्ति भेट्टाउन प्रयास गर्दै आफ्नो ईश्वरीय प्रकृति प्रदर्शन गर्दै कृतज्ञता र कृतज्ञता व्यक्त गरे। यी दुई दयालु कार्यहरू आफैंमा साना देखिन्छन्, तर ती पछाडि ईश्वरीय प्रेमको सर्वशक्तिमानता थियो, र तिनीहरूबाट नै जर्मनीमा साँचो “सुधार” आएको छ।
"अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले ठूलो ज्योति देख्दछन्: मृत्युको छायाको भूमिमा बस्ने मानिसहरूमाथि ज्योति चम्किन्छ"। (यशैया 9:2).